ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ | Zeevou
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး အနေနှင့်သင်၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုရှင်းပြရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအွန်လိုင်းစာရင်းကိုင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္financeာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှု Zeevou မှကြိုဆိုပါသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းပြရန်ရည်ရွယ်သည် ကျေးဇူးပြု၍ သေချာဖတ်ပါ
ဤသတ်မှတ်ချက်များသည်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုသည်။ Zeevou ကသင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပေးသည့် အချိန်မှစ၍ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အသုံးပြုသူ၏တုံ့ပြန်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲလိမ့်မည် ဤသတ်မှတ်ချက်များသည်မေးခွန်းတိုင်းကိုဖြေဆိုရန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောပြeveryနာတိုင်းကိုဖြေရှင်းရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ Zeevou သည်ဤဝေါဟာရများကိုအချိန်မရွေးပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပြုပြင်ထားသောအသုံးအနှုန်းများတင်သည့်အချိန်တွင်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ Zeevou သည်ဤပြောင်းလဲမှုများကိုသင့်အားအီးမေးလ် (သို့) ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့်သင်မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အားထုတ်လိမ့်မည်။ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲသွားဖွယ်ရှိသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိလတ်တလောအသုံးအနှုန်းများကိုသင်ဖတ်ရှု၊ နားလည်၊ သဘောတူကြောင်းသေချာစေရန်သင်၏တာ ၀ န်သည်။
ရံဖန်ရံခါ Zeevou သည်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်သဘောတူညီချက်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဥပမာ - လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အင်္ဂါရပ်များတိုးတက်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်အသစ်များထည့်ခြင်း၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောနည်းပညာဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှု၏လုံခြုံရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ Zeevou သည်သဘောတူစာချုပ်များကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သောအခါအခြေအနေများအောက်တွင်သင့်အားသင့်လျော်သောအသိပေးချက်ကိုပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ထင်ရှားသောသတိပေးချက်တစ်ခုပြခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွင်းသင်၏သဘောတူညီမှုကိုရှာခြင်းသို့မဟုတ်သင့်အားအီးမေးလ်ပို့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် Zeevou သည်သင့်အားကြိုတင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်သင်ပြောင်းလဲမှုများကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဤသတိပေးချက်ကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ သဘောတူစာချုပ်အသစ်အရ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်မသုံးလိုပါကသင်၏အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့် success@zeevou.com.
Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအားထုတ်မှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြောင်းလဲမှုများကိုထင်ဟပ်စေရန်လိုအပ်သောအချို့သောနည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲများ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်စမ်းသပ်ခြင်းများသို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းခြင်းများသည်အခါအားလျော်စွာယာယီပြတ်တောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှု၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များအားကာလတိုနှင့်အချိန်မရွေးသို့မဟုတ်အပြီးအပိုင်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းပြချက်များမှတစ်ဆင့်ကြိုတင်အသိပေးခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ် ၄ င်း၏လုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်ကိုစစ်မှန်သောအနှောင့်အယှက်၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာများသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်များကိုပြုပြင်ရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်၊ သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသို့လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်အသစ်များထည့်ရန်သို့မဟုတ် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု၏လုံခြုံမှု၊ ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသေချာစေရန်။
၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းများကိုသင်ဖတ်ရှုနားလည်ကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ (ရနိုင်သည် https://zeevou.com/privacy-policy/ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့မည်ပုံစီမံသည်ကိုထုတ်ဖော်ထားသည်။ သင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနေသူမည်သူမဆိုကိုကိုယ်စားပြုမူရန်သင့်တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ သင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားမဆိုဤသတ်မှတ်ချက်များအားသင်သဘောတူသည်ဟုမှတ်ယူသည်။
“ ၀ င်ငွေခ”
ဆိုသည်မှာအခကြေးငွေဇယားနှင့်အညီသင်ပေးဆောင်ရမည့်လစဉ်ကြေး (အခွန်နှင့်အကောက်ခွန်မပါဘဲ) ကိုဆိုသည်။
၀ န်ဆောင်မှုအပါအ ၀ င်အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေနှုတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပါ ၀ င်သူများအကြားဖလှယ်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်အခြားပါတီမှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထုတ်ဖော်ခြင်း မှလွဲ၍ အများပြည်သူရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်မပါ ၀ င်ပါ။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သင်သို့မဟုတ်သင်၏အခွင့်အာဏာဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည့်မည်သည့်အချက်အလက်သို့မဟုတ်မဆိုကိုဆိုလိုသည်။
ဆိုသည်မှာ Zeevou ၏ subscriptions နှင့် billing စာမျက်နှာများတွင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဆိုလိုသည် WebsiteZeevou မှသတင်းအချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအခြားစာမျက်နှာများ (သို့) Zeevou မှအခါအားလျော်စွာပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
မူပိုင်ခွင့်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအခွင့်အရေး၊ ဒီဇိုင်း၊ အသိပညာနှင့်အခြားသောအသိဥာဏ်ပညာနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုဆိုသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိမရှိဆိုသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် (Zeevou မှမကြာခဏပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ်မွမ်းမံနိုင်သည်) the ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုများကိုဆိုလိုသည်။
ဆိုလိုသည်မှာဒိုမိန်းရှိအင်တာနက်ဆိုက်ကိုဆိုလိုသည် zeevou.com သို့မဟုတ် Zeevou မှလုပ်ကိုင်သောအခြားမည်သည့် site ကိုမဆို။
ဆိုလိုသည်မှာပထမအကြိမ် Kensington ကုန်သည်များ၊ အမှတ် ၄၆/၅၀ Kensington Pl, St Helier JE132351 1ZE၊ ဂျာစီ၊ Channel Islands တွင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ၁၃၂၃၅၁ အောက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနံပါတ် ၁၃၂၃၅၁ ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသော Zeevou လီမိတက်ကိုဆိုလိုသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအချိန်နှင့်အမျှအခါအားလျော်စွာသုံးစွဲသူ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုသူ၊
ဆိုလိုသည်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်မှတ်ပုံတင်ထားသူကိုဆိုလိုသည်၊ အခြေအနေတွင်ပါက ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်မှတ်ပုံတင်ထားသောသူသည်မည်သည့်ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုသည်ဆိုသည်ကိုဆိုလိုသည်။
Subscriber ကိုဆိုလိုသည်။ အခြေအနေသည်မည်သည့်နေရာတွင်ခွင့်ပြုပါသနည်း။ “ သင်၏” သည်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသို့သင်ကဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အပ်လုပ်လုပ်ခြင်း၊ ပုံဖော်ခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်းများ၊ သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအပါအ ၀ င်သင်၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကိုယ်စားပြုရန်အသုံးပြုသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုဆိုလိုသည်။
2. Software ကိုအသုံးပြုခြင်း
Zeevou သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားအရသင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ၀ င်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။ ဤအခွင့်အရေးသည်သီးသန့်မဟုတ်သော၊ လွှဲပြောင်းမရသော၊ Subscriber နှင့်ဖိတ်ကြားထားသည့်အသုံးပြုသူများအကြားရှိသက်ဆိုင်သောရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်အခြားသက်ဆိုင်သောဥပဒေများရှိပါကသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
၁။ စာရင်းပေးသွင်းသူသည်ဖိတ်ကြားထားသူကိုမည်သူသတ်မှတ်မည်၊ အသုံးပြုသူ၏အခန်းကဏ္ level နှင့်မည်သည့်အဆင့်ကိုဖိတ်ကြားထားသည့်အသုံးပြုသူရရှိထားသည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။
၂။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည် ၄ ​​င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖိတ်ကြားထားသည့်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
၃။ သုံးစွဲသူသည်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအချိန်မရွေး ၀ င်ရောက်နိုင်သောသုံးစွဲသူအဆင့်တိုင်းကိုစာရင်းပေးသွင်းသူသည်အချိန်မရွေးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုထိုပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအားဖိတ်ကြားထားသည့်အသုံးပြုသူ၏ ၀ င်ရောက်မှုအဆင့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ ဖိတ်ကြားထားသည့်သုံးစွဲသူအဖြစ်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည် (သို့) အမှုဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသော ၀ င်ရောက်မှုအဆင့်များရှိရမည်။
၄။ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုရယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာရင်းပေးသွင်းသူနှင့်ဖိတ်ကြားထားသည့်အသုံးပြုသူများအကြားအငြင်းပွားမှုများရှိပါက၊ စာရင်းသွင်းသူသည်ဖိတ်ကြားထားသည့်သုံးစွဲသူအတွက်သက်ဆိုင်ရာဒေတာသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သည့်လက်လှမ်းမီမှု (သို့) ၀ င်ရောက်နိုင်မှုအဆင့်ရှိမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရမည်။ အဖွဲ့အစည်း။
Zeevou သည်ဖိတ်ကြားခံထားရသောသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက်အကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဖိတ်ကြားထားသည့်သုံးစွဲသူသည် Zeevou နှင့်ဆက်သွယ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ရှိပြီး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောအခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Zeevou သည်အခမဲ့အစီအစဉ်နှင့်ငွေပေးချေမှုအတွက်ကြေးပေးသွင်းသည်။ သင်အခမဲ့အစီအစဉ်တွင်မပါဝင်ပါက၊Access Access Fee အတွက်ငွေတောင်းခံလွှာကိုအခကြေးငွေဇယားပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အညီလစဉ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ Zeevou သည်သဘောတူစာချုပ်ကိုအပိုဒ် ၈ အရရပ်စဲသည်အထိသင်၏ငွေစာရင်းဇယားအတိုင်းဆက်လက်ငွေတောင်းခံပါမည်။
Zeevou ၏ငွေတောင်းခံလွှာများအားလုံးကိုသင်၏အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်အားပေးသောငွေတောင်းခံလွှာသို့ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။ ငွေတောင်းခံလွှာတွင်ဖော်ပြထားသောငွေပမာဏအားလုံးအားငွေပေးချေခြင်းဇယားနှင့်အညီပေးချေရမည်။ Access Fee အပြင်အခွန်နှင့်ဝန်ဆောင်ခအားလုံးကိုသင်ပေးချေရမည်။
Zeevou သည်အခကြေးငွေပေးသွင်းခြင်းအတွက်ထပ်မံပေးသွင်းရန်အခကြေးငွေ၊ ကြိုတင်ပေးချေမှုကာလ (ကြိုတင်ငွေမပေးရသေးသောကာလများအတွက်) သို့မဟုတ်ကုဒ်များအပါအ ၀ င် Paid Subscriptions ၏စျေးနှုန်းကို ပြောင်းလဲ၍ သင့်အားစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်၊ သူတို့အားအပြောင်းအလဲများကိုလက်ခံဖို့ဘယ်လို။ စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုသည်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲနေ့စွဲမှနောက်လာမည့် subscription ကာလအစတွင်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရသင်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစတင်သက်ရောက်ပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်စျေးနှုန်းအသစ်ကိုသင်လက်ခံသည်။ စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲနှင့်သင်သဘောမတူပါကအကျိုးသက်ရောက်မည့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုမတိုင်မီ Paid Subscription မှစာရင်းမသွင်းခြင်းဖြင့်သင်ပြောင်းလဲမှုကိုငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ VAT သည်သက်ဆိုင်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်၎င်းကိုရှိပြီးသားစျေးနှုန်း၏ထိပ်တွင်ပေးဆောင်ရန်သဘောတူသည်။
သင်သည် Paid Subscription တစ်ခုအတွက်သင်မှတ်ပုံတင်လျှင်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလုံးဝမရှိဘဲသင်၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် (“ Cooling-” အတွက်မှတ်ပုံတင်သည့် နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ် (၃၀) အတွင်းပေးရသည့်ငွေအားလုံးကိုအပြည့်အဝပြန်အမ်းနိုင်လိမ့်မည်။ အောက်ပါတို့နှင့်အညီ: "ကာလပိတ်")
သင် Trial တစ်ခုအတွက်စာရင်းသွင်းလျှင်သင် Trial လက်ခံရရှိသည့်အတွက်ပေးဆောင်ရမည့် Subscription အတွက် Cooling-off Period သည်သင်စတင်စမ်းသပ်ပြီးနောက်ဆယ်လေး (၁၄) ရက်အစပြုသည်ကိုသင်သဘောတူသည်။ Cooling-off ကာလမကုန်ဆုံးမီသင်သည် Paid Subscription ကိုမပယ်ဖျက်ပါကသင်သည်သင်၏နှုတ်ထွက်ခွင့်ကိုဆုံးရှုံးပြီး Zeevou အားသင်ပေးဆောင်ရသော Subscription ကိုမဖျက်သိမ်းမှီတိုင်အောင်သင့်အားသဘောတူညီထားသောစျေးနှုန်းကိုလတိုင်းအလိုအလျောက်အားသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်သည် Paid Subscription ကိုတရား ၀ င်မရှိဝယ်ယူပါက Zeevou ကိုသင်ပယ်ဖျက်သည်အထိလတိုင်းသင့်အားအလိုအလျောက်အားသွင်းရန်သင်ခွင့်ပြုသည်။ Cooling-off ကာလသည်သင်၏ ၀ ယ်ယူပြီး ၁၄ ရက် (၂၈) ရက်အတွင်းရရှိနိုင်သည်ဟုသင်သဘောတူသော်လည်း၎င်းကာလအတွင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်အသုံးပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဆုံးရှုံးသွားသည်။
Zeevou သည်သင့်အားမှားယွင်းစွာငွေပေးချေသည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကညှိနှိုင်းမှုသို့မဟုတ်အကြွေးကိုရယူရန်အတွက်အမှားသို့မဟုတ်ပြproblemနာပေါ်ပေါက်လာသည့်ပထမငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပြန်ချိန်တွင်ရက်ပေါင်း ၆၀ ထက်နောက်မကျမှီ Zeevou ကိုသင်ဆက်သွယ်ရမည်။ မေးမြန်းမှုများကို Zeevou ၏ Partner Success Team သို့ညွှန်ကြားသင့်သည်။
2. ဦး စားပေးစျေးနှုန်းသို့မဟုတ်လျှော့စျေး:
၀ န်ဆောင်မှုတွင်သင်ထည့်သွင်းထားသော (သို့) သင်၏အခွင့်အာဏာနှင့် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သင်ပေါင်းထည့်ထားသောအဖွဲ့အစည်းအရေအတွက်ကြောင့် ၀ န်ဆောင်ခအတွက်အထူးစျေးနှုန်းသို့မဟုတ်အထူးလျှော့စျေးများကိုသင့်အားရံဖန်ရံခါကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ '' အဖွဲ့အစည်းများ ') ။ ထိုကဲ့သို့သော ဦး စားပေးစျေးနှုန်းများသို့မဟုတ်အထူးလျှော့စျေးများအတွက်ရထိုက်ခွင့်သည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့် Access အခကြေးငွေများပေးဆောင်ရန်သင်၏တာဝန်ကိုလက်ခံခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ Zeevou သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်ဥပဒေအရ Zeevou ရှိနိုင်သည့်အခြားအခွင့်အရေးများကိုမထိခိုက်စေဘဲ Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းအတွက်အပြည့်အဝ (လျှော့စျေးမဟုတ်သော) ၀ န်ဆောင်ခအခကြေးငွေများအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာများကိုထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်။ ထိုအခကြေးငွေများအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာကိုအခကြေးငွေဇယားတွင်ဖော်ပြထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအပြည့်အဝပေးချေမှုမရှိပါကသင်၏အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် တွဲဖက်၍ ဖြစ်စေ၊ တဆင့်ဖြစ်စေတတိယပါတီထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပါအထူးမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များ၊ အသင်းဝင်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိူင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှပေးသောထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းထားသော subscription အစီအစဉ်များနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြင်ဆင်ခြင်း၊
သင်ကကုဒ်နံပါတ်၊ လက်ဆောင်ကဒ်၊ ကြိုတင်ပေးငွေကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်အခြားပေးဆောင်ခြင်းများကို Zeevou မှလည်းကောင်း၊ ကိုယ်စားပေးဆောင်။ လည်းကောင်း ၀ ယ်ယူခဲ့လျှင် (သို့) Paid Subscription (“ Code”) ကိုရယူရန်၊ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်လည်း Code သည်လျှောက်ထားနိုင်ပြီးမည်သည့်စည်းကမ်းချက်များကိုမဆိုလိုက်နာရန်သင်သဘောတူသည်။ Paid Subscription ကိုတတိယပါတီမှတဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်၏ ၀ င်ရောက်မှုကိုသဘောတူစာချုပ်များအပြင်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်နှင့်သီးခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့် Zeevou မှပေးပို့သောအသိပေးချက်သို့မဟုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်တင်ထားသောအခြေအနေနှင့်အညီသင်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဝဘ်ဆိုက်ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်တရားဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုရမည်။ အခြားသူများ၏ကိုယ်စားသို့မဟုတ်အခြားသူများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်သင် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဝဘ်ဆိုက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကသင်ကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ထားသူများအတွက်သို့မဟုတ်လက်ခံသူများအားလုံးသည်လိုက်နာရန်နှင့်လက်ခံရန်လိုအပ်သည်။ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောဤသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များအားလုံး။
၁။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူရန်လိုအပ်သောသုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်အားလုံးကိုလုံခြုံပြီးလျှို့ဝှက်ထားရမည်။ သင်၏စကားဝှက်များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အခြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုများကို Zeevou အားချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။ Zeevou သည်သင်၏စကားဝှက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်မည်။ Zeevou ၏ကွန်ပျူတာစနစ်များနှင့်ကွန်ယက်များနှင့်သင်၏သင်၏လုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်ဟု Zeevou မှသင့်လျော်စွာယူဆသည်။ န်ဆောင်မှုများမှဝင်ရောက်ခွင့်။ Zeevou သည်မသင့်လျော်ဟုယူဆသောစကားဝှက်များကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ၀ န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ အသုံးပြုသောအခါသင်သည် -
i ။ Zeevou ၏ကွန်ပျူတာစနစ်များသို့မဟုတ်ကွန်ယက်များ၏လုံခြုံမှုသို့မဟုတ်သမာဓိကိုယိမ်းယိုင်စေရန်ကြိုးပမ်းခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတတိယပါတီမှလက်ခံထားရှိခြင်း၊ ထိုတတိယပါတီ၏ကွန်ပျူတာစနစ်များနှင့်ကွန်ယက်များ၏ပျက်ယွင်းခြင်း၊
ii ။ ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည့်မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုအသုံးပြုခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်းမပြုရ။ ၀ န်ဆောင်မှုများပို့ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုရန်စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းများ၊
iii ။ ၀ န်ဆောင်မှုများလက်ခံထားသောကွန်ပျူတာစနစ်သို့သင် ၀ င်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုထားသောအခြားပစ္စည်းများ မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းများမှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရယူခွင့်ကိုမကြိုးစားပါနှင့်။
ဃ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်၏ကွန်ပျူတာပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုမဆိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်ဖိုင်များ၊ ဥပဒေကြောင်းကိုချိုးဖောက်သောပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဒေတာများ (မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များမှကာကွယ်ထားသည့်အခြားပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်) မည်သည့်အရာ၊ သင်သုံးစွဲခွင့်မရှိပါ။ နှင့်
၀ န်ဆောင်မှုများပို့ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်လည်ပတ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသောမည်သည့်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကိုမဆိုပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်အသုံးပြုရန်တင်းကြပ်စွာလိုအပ်သည်မှတစ်ပါးပြုပြင်ရန်၊ ကူးယူရန်၊ လိုက်လျောညီထွေရန်၊
Zeevou သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ သို့သော် Zeevou သည်ထိုအရာကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးအထက်ပါအချက်များကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သည်ဟုယူဆရသော ၀ န်ဆောင်မှုများအားအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်နိုင်သည်။
Zeevou ၏ဆာဗာများပေါ်တွင်သင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့်အချက်အလက်ပမာဏသို့မဟုတ် Zeevou ၏ application programming interface အားတားဆီးရန်သင်ခွင့်ပြုထားသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကန့်အသတ်ရှိနိုင်သည်။ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောကန့်သတ်အကြံပေးလိမ့်မည်။
ဤစည်းကမ်းချက်များ၏စည်းကမ်းချက်များအရ အကယ်၍ သင်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက် (ဥပမာဖိုရမ်၊ စကားပြောခန်း (သို့) မက်ဆေ့ခ်ျစင်တာ) ကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုပါက၎င်းကိုဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများကိုတရားဝင်နှင့်တရားဝင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုရန်သင်သဘောတူသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုတင်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်မည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာကိုမဆိုအသုံးမပြုရ။ (သို့သော်အကန့်အသတ်မရှိ) ရောင်းရန်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းမှုများ၊ မလိုလားသောစီးပွားဖြစ်အီးမေးလ်၊ အခြားသူတစ် ဦး ၏ကွန်ပျူတာကိုပျက်စီးစေနိုင်သောဖိုင်များ။ စက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်)၊ အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအခြားအသုံးပြုသူများကိုစော်ကားသောအကြောင်းအရာများ (သို့မဟုတ်မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များဖြင့်သင်အသုံးပြုရန်မလိုအပ်သောပစ္စည်းအပါအ ၀ င်) ကိုဥပဒေချိုးဖောက်သောပစ္စည်းများ။
၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုကိုမဆိုသင်ပြုလုပ်သောအခါသင်သည်ထိုသို့သောဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုကြောင်းဖော်ပြသည်။ Zeevou သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိဆက်သွယ်မှုများသည်တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်တာဝန်မရှိပါ။ အခြားကွန်ရက်အခြေပြုဖိုရမ်များကဲ့သို့ပင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသောအခါသတိထားရမည်။ သို့သော် Zeevou သည်မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုကိုမဆို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Zeevou အားသင်၏စည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ် Zeevou အားသင်ပေးရမည့်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုချိုးဖောက်ခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသည့်တောင်းဆိုမှုများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးကို Zeevou မှသင်လျော်ကြေးပေးပါမယ်။ ပေးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်သော်လည်းသင့်အားပေးဆောင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
၁။ ပါတီတစ်ခုစီသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ ရရှိသောအခြားလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်။ မည်သည့်ပါတီကမျှအခြားသူများ၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရဘဲမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းစည်းကမ်းချက်များတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့်အရာ မှလွဲ၍ ၎င်း၏အကျိုးအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၂။ ဤအပိုဒ်အောက်ရှိပါတီတစ်ခုချင်းစီ၏တာ ၀ န်များသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုရပ်တန့်သွားခြင်းမှလွတ်မြောက်လိမ့်မည်။
၃။ အပိုဒ် ၄.၁.၁ နှင့် ၄.၁.၂ ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များသည်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
i ။ ဤအပိုဒ်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲအများပြည်သူဆိုင်ရာအသိပညာကိုဖြစ်စေ၊
ii ။ ၎င်းကိုတရား ၀ င် ၀ ယ်ယူသူနှင့်ထုတ်ဖော်ခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်တာဝန်မရှိသောတတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံမှရရှိခြင်း၊
iii ။ ထုတ်ဖော်ပါတီထံမှလက်ခံရရှိသည့်နေ့မတိုင်မီထုတ်ဖော်နှင့်စပ်လျဉ်းကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲလက်ခံရရှိပါတီ၏ပိုင်ဆိုင်မှု၌ရှိ၏ ဒါမှမဟုတ်
၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမဆိုခေါင်းစဉ်နှင့်အားလုံး၏မူပိုင်ခွင့်များသည် Zeevou (သို့မဟုတ်၎င်း၏လိုင်စင်ရသူများ) ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။
Zeevou software application များနှင့်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသင့်အားရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ Zeevou နှင့်၎င်း၏လိုင်စင်ရသူများသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများ၊ မိုဘိုင်းဟန်းဆက်များ၊ တက်ဘလက်များ၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာများ၊ စပီကာများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးသည့်တိုင် Zeevou software application များနှင့် Content များကိုမိတ္တူကူးယူထားသည်။ နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားကိရိယာများ။
Zeevou ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဒိုမိန်းအမည်များနှင့် Zeevou အမှတ်တံဆိပ်၏အခြားအင်္ဂါရပ်အားလုံးသည် Zeevou သို့မဟုတ်၎င်း၏လိုင်စင်ရသူများ၏တစ်ခုတည်းသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ သဘောတူစာချုပ်များအရ Zeevou အမှတ်တံဆိပ်အင်္ဂါရပ်များကိုစီးပွားဖြစ်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်သင့်အားမည်သည့်အခွင့်အရေးကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
အချက်အလက်များ၏ခေါင်းစဉ်နှင့်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများအားလုံးသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ဒေတာကိုသင်၏လက်လှမ်းမီမှုသည် Zeevou Access Fee အားပေးဆောင်ရန်အပြည့်အဝပေးဆောင်ခြင်းအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်သင်၏အချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကို Zeevou အားအသုံးပြုရန်၊ ကူးယူရန်၊ ထုတ်လွှတ်ရန်၊ သိုလှောင်ရန်နှင့်အရန်ကူးရန်အတွက်လိုင်စင်ကိုသင်ပေးသည်။
Zeevou တွင်သင်တင်ထားသောမည်သည့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာနှင့်မဆို (၁) သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်သို့မဟုတ်တင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (၂) ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ၊ သို့မဟုတ် Zeevou မှသဘောတူစာချုပ်များအရ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်ချက်များ၊ သက်ဆိုင်သောဥပဒေသို့မဟုတ်ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်၊ လူသိရှင်ကြား၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏အခြားအခွင့်အရေးများအတွင်းသဘောတူညီချက်များသို့မဟုတ်အခြားအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်နှင့်သင်၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအား Zeevou သို့မဟုတ်မည်သည့်အနုပညာရှင်ကမျှထောက်ခံခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ Zeevou သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်း၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ၊ band, label၊ entity သို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်း။
Zeevou သည်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာကိုစောင့်ကြည့်ရန်၊ ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင် Zeevou သည်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မျှမရှိဘဲအသုံးပြုသူပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကို Zeevou ၏တစ် ဦး တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သဘောတူညီချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းအားဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းကိုခွင့်ရှိသည်။ Zeevou သည်သင်သို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီကိုမှကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲထိုလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူပါဝင်သည့်အရာများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သာဖြစ်လိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအားအသုံးပြုခွင့်ကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့ကတိမပေးပါ။
Zeevou အားသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မှုသက်တမ်းနှင့်အနှစ် ၂၀ (၂၀) ​​သက်တမ်းနှင့်ညီမျှသောသက်တမ်းအတွက် (သို့) ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသောတရားစီရင်မှုတွင်) သီးသန့်မဟုတ်သော၊ အပြည့်အဝပေးရသော၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးလိုင်စင်ကိုအသုံးပြုရန်၊ မျိုးပွားရန်၊ အများပြည်သူသိရှိစေရန် (ဥပမာလုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖော်ပြခြင်း)၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်, မည်သည့်ထုံးစံ၌နှင့်မဆိုနည်းလမ်းများ, နည်းလမ်းသို့မဟုတ်နည်းပညာ, ယခုလူသိများသို့မဟုတ်နောင်တွင်ဖန်တီးရှိမရှိ။ ဤနေရာတွင်အထူးခွင့်ပြုထားသောအခွင့်အရေးများအပြင်၊ သင်သည်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာတွင်ဥာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အပါအ ၀ င်အခွင့်အရေးအားလုံး၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရ အသုံးချ၍ ခွင့်ပြုပါကသင်သည်မည်သည့်“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ” သို့မဟုတ်တူညီသောအခွင့်အရေးများကိုမဆိုငြင်းဆန်ရန်နှင့်လိုက်နာရန်သဘောတူသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပါအဝင်မည်သည့်အသုံးပြုသူပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုရေးသားသူအဖြစ်ဖော်ပြရန်သင်၏အခွင့်အရေးနှင့်သင့်အားခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုကန့်ကွက်ရန်သင်သဘောတူသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာကုသမှု။
ဆန့်ကျင်ဖက်ဘာမှမဆိုသော်လည်း Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောစနစ်များနှင့်နည်းပညာများ၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှအချက်အလက်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပိုင်ခွင့်ရှိသည် (သင့်ဒေတာနှင့်ဆင်းသက်လာသည့်အချက်အလက်များအပါအ ၀ င်) Zeevou သည် (ဤဥပဒေသက်တမ်းကာလအတွင်းနှင့်ထိုကာလအတွင်း) တွင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ (i) ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အခြား Zeevou ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများအားတိုးတက်စေရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်း၊ နှင့် (ii) ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကို၎င်း၏စီးပွားရေးနှင့်ဆက်စပ်။ စုစုပေါင်းသို့မဟုတ်အခြား de- ဖော်ထုတ်ပုံစံအတွက်သာထုတ်ဖော်။ အတိအလင်းဖော်ပြထားသည် မှလွဲ၍ မည်သည့်အခွင့်အရေးနှင့်လိုင်စင်ကိုမျှပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
သင်တင်ပို့သည့်အကြောင်းအရာအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ Zeevou သည်အကြောင်းအရာအတွက်တာဝန်မရှိပါ မည်သူမဆို ZEEVOU ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းတိုင်ကြားလျှင်အသုံးပြုသူရဲ့ပါဝင်မှုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုမယ်ဆိုရင်၊ သင်သဘောတူတယ်၊ အဲဒီနောက်၊ တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့တရား ၀ င်တရား ၀ င်တရားဥပဒေအောက်မှာ၊ ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုချက်ထဲကပေါ်ပေါက်) အကြောင်းပြချက်အကျိုးဆောင်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်။
၀ န်ဆောင်မှုတွင်ထည့်သွင်းထားသောအချက်အလက်အားလုံး၏မိတ္တူများကိုသင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ Zeevou သည်အချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်၎င်း၏အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာသည်။ နေ့စဉ်စနစ်ဒေတာကို back-up စစ်အစိုးရအပါအဝင်သို့သော်ဒေတာဆုံးရှုံးမှုမရှိနိုင်ကြောင်းအာမခံချက်မရှိပါ။ Zeevou သည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါစေဒေတာဆုံးရှုံးမှုအတွက်တာဝန်ယူမှုကိုသီးသန့်ဖယ်ထုတ်ထားသည်။
4. Third-party application များနှင့်သင်၏အချက်အလက်
၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် တွဲဖက်၍ အသုံးပြုရန် third-party application များကိုသင်ဖွင့်ထားပါက Zeevou သည် third-party application များ၏ပံ့ပိုးသူများကိုသင်၏ third-party application များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအတွက်လိုအပ်သည့်အတိုင်းသင်၏ Data ကိုရယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ကိုသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ တတိယပါတီအပလီကေးရှင်းပံ့ပိုးသူများကဤသို့သောဝင်ရောက်ခွင့်မှရရှိသောသင်၏အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် Zeevou သည်တာ ၀ န်မရှိပါ။
သင်သည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုယ်စား ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနေရာတွင်သင်သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ကိုယ်စားဤသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတူရန်အခွင့်အာဏာရှိပြီးသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်သင်ပြုသူသည်သင်ကိုယ်စားပြုသူကိုချည်နှောင်ထားကြောင်းသင်အာမခံပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရသင်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာရမည့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
၁။ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုရန်သင်နှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ထဲသို့သင်ထည့်သွင်းထားသောအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကို ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင်ခွင့်ပြုထားသူမည်သူမဆို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်အားရရှိနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကို (ထိုအချက်အလက်များနှင့်အချက်အလက်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေ၊ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏ဖြစ်စေ) ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
၂။ Zeevou သည်သင် မှလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှတာဝန်မရှိပါ၊ ဤသဘောတူညီချက်တွင်သင် မှလွဲ၍ အခြားသူအားအကျိုးခံစားခွင့်ပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုပါကသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင် မှလွဲ၍ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏အကျိုးအတွက်သို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ၀ င်ရောက်ပါက (ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်စေ)
i ။ သင်၌လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်သင်၌တာဝန်ရှိသည်။
ii ။ သင်သည်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ဒေတာများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသောမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုခွင့်ပြုရန်တာဝန်ရှိသည်။ Zeevou သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှထိုသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အချက်အလက်များကိုရယူခွင့်ပေးရန်တာဝန်မရှိကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ နှင့်
iii ။ Zeevou နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်တောင်းဆိုမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုမဆိုသင်အားလျော်ကြေးပေးပါလိမ့်မည်။
i ။ ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ Zeevou သည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်အချက်အလက်များကိုရယူရန်ငြင်းဆိုခြင်း
ii ။ Zeevou သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်မည်သူမဆိုသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အချက်အလက်များကိုရနိုင်သည်။
၃။ ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်“ ဖြစ်သကဲ့သို့” အခြေခံနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်ဖြစ်သည်။
4. Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်သို့မဟုတ်အမှားကင်းစွာပြုလုပ်ရန်အာမခံချက်မရှိပါ။ အများပြည်သူသုံးတယ်လီဖုန်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကွန်ပျူတာကွန်ယက်များနှင့်အင်တာနက်တို့အပါအဝင် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ င်ရောက်ရန်အတွက်အသုံးပြုသောစနစ်များ၏လည်ပတ်မှုနှင့်ရရှိနိုင်မှုတို့သည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းရခက်နိုင်ပြီးရံဖန်ရံခါ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတားဆီးနိုင်သည်။ Zeevou သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုထိုကဲ့သို့သော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှတာဝန်မရှိပါ။
(၅) Zeevou သည်သင်၏စာရင်းကိုင်မဟုတ်ပါ၊ ၀ န်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ကမ်းလှမ်းသောစာရင်းကိုင်ပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စာရင်းအင်းအကြံဥာဏ်ကိုလက်ခံခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင့်တွင်စာရင်းကိုင်မေးခွန်းများရှိလျှင်၊
၆။ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မှာသင်၏တစ်ခုတည်းသောတာ ၀ န်ဖြစ်သည်။
၇။ သင်သက်ဆိုင်သည့်စာရင်းကိုင်၊ အခွန်နှင့်အခြားဥပဒေများကိုလိုက်နာရန်သင်တစ် ဦး တည်းသာတာ ၀ န်ရှိသည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်သင်၏အချက်အလက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများ (မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည့်ဥပဒေများအပါအ ၀ င်) နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သင့်တာဝန်ဖြစ်သည်။
၈။ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆက်သွယ်ရန်၊ အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောမည်သည့်စက်ကိရိယာနှင့်အထောက်အပံ့မဆို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲ modems, hardware, servers, software, operating systems, networking, web server နှင့် (စုပေါင်း, "ပစ္စည်းကိရိယာများ") ။ ပစ္စည်း၊ လုံခြုံရေး၊ သင်၏အကောင့်၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်များ (အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အသုံးပြုသူများ၏စကားဝှက်များအပါအ ၀ င်) နှင့်ဖိုင်များနှင့်သင်၏အကောင့် (သို့) သင်၏အသိပညာသို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူ၊ မပါဘဲအသုံးပြုခြင်းအတွက်လည်းတာဝန်ရှိသည်။
(၉) ၀ န်ဆောင်မှု၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်သင်၏ Device မှပရိုဆက်ဆာ၊ လှိုင်းအကျယ်နှင့်သိုလှောင်ရေးစက်ပစ္စည်းများကို ၀ န်ဆောင်မှုအားခွင့်ပြုရန်၊ (၂) သင့်အားကြော်ငြာနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ (9) ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအလားတူလုပ်ခွင့်ပြုရန်။ ၀ န်ဆောင်မှု၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို Zeevou ၏တတိယပါတီများနှင့်သဘောတူညီချက်များအပါအ ၀ င်၎င်းကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်နေရာချခြင်းအပါအ ၀ င်သင်ကြည့်ရှုသည့်အကြောင်းအရာ၊
၁၀။ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ Zeevou အားသင်တုန့်ပြန်မှု၊ အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များကိုပေးအပ်ပါကသင်တုန့်ပြန်ချက်သည်လျှို့ဝှက်ချက်မရှိကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုပြီး Zeevou အားထိုတုံ့ပြန်ချက်ကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပဲနှင့်သင့်အားငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုရန်သင်ခွင့်ပြုသည်။ တုံ့ပြန်ချက်ကိုဒေတာအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
၁၁။ Zeevou အား Zeevou မှပုံစံများကို အသုံးပြု၍ မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်မှအကြောင်းကြားပါကမည်သည့်အသုံးပြုသူပါဝင်မှုသည်မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ကြောင်း Zeevou က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုမှအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် Zeevou မှသင့်လျော်သည်ဟုယူဆသောအခြားအဆင့်များကိုလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည် ထိုအကြောင်းအရာကိုဖြန့်ဝေသောသို့မဟုတ်တင်ပို့သောအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်အခြားပါတီသို့ကြိုတင်အကြောင်းကြားစာ။ ထိုသို့သောအသုံးပြုသူ (သို့) အခြားအဖွဲ့ကအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာသည်ချိုးဖောက်ခြင်းမဟုတ်ဟုယုံကြည်ပါကသူသည်အချို့သောအခြေအနေများတွင် Zeevou ၏တစ်ခုတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် Zeevou မှချီးကျူးနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဂုဏ်မပြုနိုင်သောဖယ်ရှားထားသောအကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ရယူရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် Zeevou သို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့နိုင်သည်။ ။
၁၂။ သင်၏အကောင့်ရှိမည်သည့်လမ်းကြောင်းမှမဆိုကျွန်ုပ်တို့ထံအကူအညီတောင်းခံခြင်းအားဖြင့်သင့်အားသင်၏အကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ခွင့်နှင့်သင်၏အချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုရယူရန်သင့်အားမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကူညီရန်သင့်အားသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
၁၃။ Zeevou သည်သင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနေသည်ဟူသောအချက်ကိုကြော်ငြာရန်ခွင့်ပြုသည်။
၁၄။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသို့တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေပေါင်းစည်းထားသောတတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲများမှတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်သော Guest ည့်သည်အချက်အလက်များကို Zeevou မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ၀ င်ရောက်လာသော to ည့်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုအခြား Zeevou ၏ Subscribers နှင့်မျှဝေရန်သင်ခွင့်ပြုထားသည်။ ပလက်ဖောင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသော Guest ည့်သည်မည်သူမဆို၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏သီးခြားလွတ်လပ်သောသုံးစွဲသူနှင့်တတိယပါတီမိတ်ဖက်များမှပေးသောဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်လာနိုင်သည်။
၁၅။ သင်၏ Gu ည့်သည်များမှ GDPR အရပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုချက်ကိုသင်လက်ခံရရှိပါကသင်သည်၎င်းတို့အားတုန့်ပြန်ရန်နှင့်သူတို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ Zeevou အား by ည့်သည်တစ် ဦး မှဖျက်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုကိုပေးပို့ပါက Zeevou သည် Zeevou တွင်သိုလှောင်ထားသော data ည့်သည်အချက်အလက်များကိုလိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများ၊ ဖျက်ခြင်းများသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
Zeevou အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်သူမျှမအာမခံပေးသည်။ အထက်ပါအချက်များကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိပဲ Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သို့မဟုတ်၎င်းသည်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆိုသင့်တော်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ။ သံသယကိုရှောင်ရှားရန်၊ သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများနှင့်အာမခံချက်များအားဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင့်လျော်မှု၊
သင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုခွင့်နှင့်အသုံးပြုခွင့်ကိုသင်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်တရား ၀ င်ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအရမည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်မဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်သောစားသုံးသူများကိုကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ဥပဒေပြconsumer္ဌာန်းထားသည့်စားသုံးသူအာမခံချက်သို့မဟုတ်ဥပဒေပြdoes္ဌာန်းထားခြင်းကိုသင်ခိုင်လုံသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသို့မဟုတ်ဤစည်းကမ်းချက်များကိုထောက်ပံ့ရန်လျှောက်ထားခြင်းမပြုရ။
၁။ Zeevou သည်ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိစာချုပ်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း (ပေါ့ဆမှုအပါအ ၀ င်) တွင်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်တာ ၀ န်များနှင့်တာ ၀ န်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဆုံးရှုံးခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှု (သို့) ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုခြင်း (သို့) အားကိုးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေထိခိုက်နစ်နာခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်း။
၂။ အကယ်၍ Zeevou ၏ပေါ့ဆမှုသို့မဟုတ်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်သင်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းခံရပါက Zeevou ၏ပေါ့ဆမှုသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုမှပေါ်ပေါက်လာသော Zeevou ကိုသင်အားဖြင့်မဆိုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုခုသို့မဟုတ်ဆက်နွယ်သောအဖြစ်အပျက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်လိမ့်မည်။ ပြီးခဲ့သည့်2လအတွင်းသင်ကပေးဆောင်သည့် Access အခကြေးငွေများကို။
၃။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်မကျေနပ်ပါကသင်၏တစ် ဦး တည်းသောသီးသန့်ဆေးဝါးသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုအပိုဒ် ၈ အရရပ်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။
ZEEVOU မှထွက်ပေါ်လာသောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများသို့မဟုတ်တတိယအပိုင်းလျှောက်လွှာများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်မှုရှိသည့်အချက်အလက်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အချက်အလက်များ၊ ဤကဲ့သို့သောကဏ္IRများမှဆက်စပ်နေသည့်အချက်အလက်များကိုသင်သဘောတူသည်။ ZEEVOU နှင့် ပတ်သတ်၍၊ သင်၏တစ်ကိုယ်ရေနှင့်သီးသန့်ဖယ်ရှားခြင်း၊ မည်သည့်ပြORနာများသို့မဟုတ်တတိယပါတီလျှောက်လွှာများသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများနှင့်မဆိုစိတ်မကျေနပ်မှုဖြစ်စေရန်၊ ဤကဲ့သို့သောတတိယအပိုင်းလျှောက်ထားမှုများကိုရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။
ZEEVOU သည်၎င်း၏ရုံးခန်းများ၊ ရှယ်ယာရှင်များ၊ အလုပ်ရှင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ လက်အောက်ခံများ၊ အထောက်အကူပြုသူများ၊ အောင်မြင်သူများ၊ စာပို့သူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊
(၁) မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်း (ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောမည်သည့်သွယ်ဝိုက်၊ အထူး၊ အထူးသဖြင့်၊ ဖြစ်ပျက်နေသော၊ ပုံသေသို့မဟုတ်သာဓက၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများပါ ၀ င်သည်) ။ ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းသည် အကယ်၍ ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်မည်သိုမဟုတ်လျှင်၎င်းသည်အချိန်နှင့်အမျှစာချုပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်သိနိုင်သည်ရှိသော်၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသည်။
(၂) မည်သည့်အရာမဆို - (က) အသုံးပြုမှုအရှုံး။ (ခ) အချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှု; (ဂ) စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှု၊ ()) အကျိုးအမြတ်များဆုံးရှုံးမှု၊ OR (E) စက်ပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်မာတိကာသို့ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် INSTALLATION INSTRUCTION INSTRUCTION IN INSTRUCTION OR လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင်ဤသို့သောပျက်စီးခြင်းကိုသင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့လျှင် - အမေရိကန်မှအကြံဥာဏ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကိရိယာများ၊ တတိယပါတီလျှောက်လွှာများ၊ သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုမည်၊ မတတ်နိုင်သောကိစ္စရပ်များတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကိရိယာများ၊ တတိယပါတီလျှောက်လွှာများ၊ သူတို့အားထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနှင့်ပင်လျှင်၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်၏ပျက်ကွက်လျှင်,
(၃) ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တောင်းဆိုမှုများအားလုံးအတွက်တတိယပါတီလျှောက်လွှာများ၊ သို့မဟုတ်တတိယပါတီလျှောက်လွှာပါအချက်များသည်မေးခွန်းများအရရှေ့ဆယ့်နှစ်လအတွင်းဇီဝဗ်သို့ပေးဆပ်ထားသောငွေပမာဏ။ OR
(၄) မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း (သို့) မသင့်လျော်သောစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန်မသင့်သောသို့မဟုတ် ZEEVOU ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောထိန်းချုပ်မှုအပြင်မည်သည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်မဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်မကျေနပ်မှု။
သဘောတူညီချက်ပါမည်သည့်အရာကမျှ Zeevou ၏လိမ်လည်မှု၊ လိမ်လည်မှုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်း၊ သေခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းအားလျစ်လျူရှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရအကြီးအကျယ်ပေါ့ဆမှုအတွက်တာဝန်ရှိမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်း။
ဤအပိုင်းသည်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေအရခွင့်ပြုချက်အပြည့်အ ၀ ရရှိသည့်အတိုင်းအတာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့အားအပိုဆောင်းကုစားမှုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသောသင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်လျှောက်ထားနိုင်သောဥပဒေများအောက်တွင်သင့်အခွင့်အရေးများရှိနိုင်သည်။
သင်သို့မဟုတ် Zeevou တို့မှရပ်စဲသည်အထိသဘောတူစာချုပ်များသည်သင့်အားဆက်လက်လျှောက်ထားမည်ဖြစ်သည်။ Feedback အပါအ ၀ င်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောသင့်အားအမြဲတမ်းခွင့်ပြုထားသောလိုင်စင်သည်လုံးဝမရရှိနိုင်ကြောင်းသဘောတူကြောင်းသင်သဘောတူပါသည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုသဘောတူစာချုပ်များသက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲပြီးနောက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်။ Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်၏အမှန်တကယ်သို့မဟုတ်သံသယဖြင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်း၊ သဘောတူညီချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရုပ်သိမ်းလျှင်သော်၎င်း၊ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရုပ်သိမ်းလျှင်သော်၎င်း၊ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပါက) သင်သို့မဟုတ် Zeevou တို့သည်သဘောတူညီချက်များကိုရပ်ဆိုင်းလျှင်သို့မဟုတ် Zeevou သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုလက်လှမ်းမီခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါက Zeevou သည်သင့်အတွက်တာ ၀ န်သို့မဟုတ်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားမရှိကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ Zeevou သည်သင်ပေးပြီးသောမည်သည့်ပမာဏကိုမဆိုပြန်လည်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ် သက်ဆိုင်သောဥပဒေ။ သဘောတူညီချက်များကိုအချိန်မရွေးရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ဤအပိုင်းကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာအထိပြဌာန်းလိမ့်မည်။
သင် ၀ န်ဆောင်မှုများဝင်ရောက်ခြင်းကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ပုံတင်သောအခါသင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်တာဝန်မရှိဘဲသတ်မှတ်ထားသောရုံးတွင်းအသုံးပြုမှုအခြေအနေများအောက်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ သင် ဆက်လက်၍ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပါကအခကြေးငွေဇယားတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ၀ န်ဆောင်မှုများထဲသို့ပထမ ဦး ဆုံးထည့်သောအခါသင်ငွေတောင်းခံပါလိမ့်မည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆက်မသုံးစွဲရန်သင်ရွေးချယ်ပါက၊ သင်၏အဖွဲ့အစည်းကို“ My Zeevou” ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကဏ္inတွင်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ Zeevou သည်သင်၏စစ်ဆေးမှုအတွက်သင်၏အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းအတာအထိကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲနှင့်တာဝန်ယူမှုမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတရားခွင်အားရုပ်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
Zeevou Prepaid Access Fee subscription အတွက်ကျန်ရှိသော prepaid ကာလအတွက်မည်သည့်ပြန်အမ်းငွေကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်က Code ကို အသုံးပြု၍ Paid Subscription ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီဆိုလျှင် Code မှာဖော်ပြထားတဲ့အချိန်ကာလရဲ့အဆုံးမှာ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးချေရန်ကြိုတင်ပေးငွေမလုံလောက်ပါကသင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုသည်အလိုအလျောက်ရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မည်။ သင် Paid Subscription ကိုတတိယပါတီမှတဆင့် ၀ ယ်ယူပါကထိုတတိယပါတီနှင့်တိုက်ရိုက်ဖျက်သိမ်းရမည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များသည်အပိုဆောင်း ၃.၁ အရပေးဆောင်ရမည့်ပေးဆောင်ရမည့်အခကြေးငွေသက်သာသောကာလအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ နှစ်ဖက်စလုံးမှအနည်းဆုံးတစ်ခု ပေး၍ ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုမရပ်တန့်ပါကငွေတောင်းခံသည့်ကာလတစ်ခုချင်း၏အဆုံးတွင်ဤသတ်မှတ်ချက်များသည်ထိုကာလနှင့်အတူတူပင်ကြာသောကာလအတွက်အလိုအလျောက်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ ငွေတောင်းခံသည့်ကာလမကုန်မီလကြိုတင်အကြောင်းကြားစာ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များအားတစ်လကြိုတင်အကြောင်းကြားစာဖြင့်သင့်၏စည်းကမ်းချက်များကိုရပ်တန့်ရန်သင်ရွေးချယ်ပါက၊ အခကြေးငွေဇယားပါနောက်ဆုံးငွေပေးချေမှုကာလကုန်ဆုံးချိန်အထိသက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်ခအခကြေးငွေအားလုံးကိုသင့်အားပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိလိမ့်မည်။ အခကြေးငွေဇယားမထုတ်ပြန်ရသေးပါကသင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုသည်လစဉ်စီးဆင်းနေပါကသင်ပေးခဲ့သောအသိပေးစာကာလအဆုံးအထိအခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်။
၁။ ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်ဖျက်ပါကချိုးဖောက်မှုအားအသိပေးခြင်းခံရပြီး ၁၄ ရက်အတွင်းချိုးဖောက်မှုအားပြန်လည်ကုစားရန်မလိုပါ။
၂။ ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းနှင့်ချိုးဖောက်ခြင်းသည် (ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ) အပိုဒ် ၃.၄ (သို့) အခကြေးငွေတွင်ဖော်ပြထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအပြည့်အဝပေးဆောင်ခြင်းမရှိသော Access အခကြေးငွေများကိုမည်သည့်ချိုးဖောက်မှုမဆို (ပြန်လည်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိသော) ပြန်လည်ကုစားရန်မစွမ်းနိုင်ပါ။ အချိန်ဇယား); ဒါမှမဟုတ်
၃။ သင်သို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောသို့မဟုတျသငျ့လုပျငနျးခှဲခှဲသို့မဟုတျသငျသညျကွှေးမွီမဆပျသောကွှေးကျွောသူဖွစျလာလြှငျ၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်,
၄။ ဤသဘောတူညီချက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
၅။ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောသို့မဟုတ်အကန့်အသတ်မရှိသောအချိန်ကိုဆိုင်းငံ့ထားပါ။
၆။ ဒေတာအားလုံးကို (သို့) မည်သည့်အရာမှ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်း။
၇။ သင်၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ဒေတာကိုရယူရန်သင်ခွင့်ပြုထားသည့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဤအပိုဒ် ၈ (၄) ပုဒ်မခွဲ ())၊ (င) နှင့် (စ) ပုဒ်မခွဲပါအရေးယူမှုတစ်ခုခုကိုဆောင်ရွက်ပါ။
သံသယမဖြစ်စေရန်သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ ငွေတောင်းခံလွှာအစီအစဉ်များ (သို့) သင်၏အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၀ င်ငွေအခကြေးငွေအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာကို (အပိုဒ် ၃ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) တွင်ဖော်ပြထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီလျှင်၊ Fee Schedule, Zeevou သည် - သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင်၏အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသို့မဟုတ်မည်သည့်အခွင့်အာဏာကိုမဆိုဆိုင်းငံ့ခြင်းသို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အချက်အလက်အားလုံးသို့မဟုတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုရယူပိုင်ခွင့်။
5. ရရှိသောအခွင့်အရေးများ -
ဤစည်းကမ်းချက်များအားရပ်စဲခြင်းသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့အထိပါ ၀ င်သောပါတီများ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသောအခါ
1. အဆုံးသတ်ခြင်းမတိုင်မီသို့မဟုတ်အပြီးငွေပေးချေမှုအတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာသည့်မည်သည့်နီးပါးရှိပါသည်စွဲချက်နှင့်ပမာဏများအတွက်တာဝန်ဆက်လက်ရှိနေ; နှင့်
2. ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုချက်ချင်းအသုံးမပြုတော့ပါ။
အပိုဒ် ၃.၁၊ ၃.၆၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ နှင့် ၁၁ တို့သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များသက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်သည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများတွင် Zeevou ကိုမဆက်သွယ်မီပြproblemsနာများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်သင့်တော်သောအားထုတ်မှုများပြုလုပ်ရမည်။ အကယ်၍ သင်နည်းပညာအကူအညီလိုအပ်နေပါက၊ Zeevou မှအွန်လိုင်းထောက်ပံ့မှုကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစစ်ဆေးပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ရန်ပျက်ကွက်ပါ success@zeevou.com. Zeevou သည်စီးပွားရေး (၂) ရက်အတွင်း Helpdesk လက်မှတ်အားလုံးကိုတုံ့ပြန်ရန်စီးပွားဖြစ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအားထုတ်မှုကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတစ်ပတ်လျှင်ခုနစ်ရက်၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီအသုံးပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသို့မဟုတ်အခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အကယ်၍ Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှုများကို Zeevou ပုံမှန်မျှော်လင့်ထားသည့်အချိန်ထက် ပို၍ ကြာမြင့်စွာနှောင့်ယှက်ရမည်ကိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုရှိလျှင် Zeevou သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုးပမ်းမှုများကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကြိုတင်ဖော်ပြရန်။
အားလပ်ရက်များ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေများနှင့်စီစဉ်ထားသည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများမှအပကျန် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလစဉ်တိုင်းတာမှု ၉၅% ရှိရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤနာရီများအတွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုတောင်းခံပါကမည်သည့်အချိန်ပိုသို့မဟုတ်ကျချိန်တွင်တွက်ချက်မှုသည်ထိုကဲ့သို့သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏သက်ရောက်မှုကာလများကိုဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်တတိယပါတီဆက်သွယ်မှုများသို့မဟုတ်အသုံးအဆောင်များပြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ် Zeevou မထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အခြားအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်အချိန်မရွေးကိုမဆိုဤတွက်ချက်မှုမှဖယ်ထုတ်ပစ်လိမ့်မည်။ ၀ န်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏တစ် ဦး တည်းသောသီးသန့်ကုသမှုနှင့် Zeevou ၏တာ ၀ န်တစ်ခုလုံးသည်နှစ်နာရီထက်ပိုသောအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း Zeevou သည်သင့်အားအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည် 5% တစ်ခုချင်းစီကိုကာလအဘို့အ Access ကိုကြေး၏ ၃၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောဆက်တိုက်ကျချိန်၌မိနစ်ပိုင်း; ထိုကဲ့သို့သောအကြွေးတစ်ခုထက်ပိုသောတစ်နေ့လျှင်တိုးပွားလိမ့်မည်ဟုထောက်ပံ့ပေး။ သင် (Zeevou ကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီး) အချိန်အားကုန်သွားသည်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိမှုပြန်လည်မရောက်မချင်းဆက်သွားရန်ဖြစ်သည်။ အချိန်ပိုခဏခဏရရှိရန်သင်သည် Zeevou ကိုအချိန်မကျသေးသည့် အချိန်မှစ၍ ၂၄ နာရီအတွင်းစာဖြင့်အကြောင်းကြားရမည်။ ထိုသို့သောအသိပေးချက်ကိုပေးရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်ခရက်ဒစ်ရရှိရန်အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောခရက်ဒစ်များကိုငွေသားဖြင့်ပြန်မရွေးရ။ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်တွင်မဆိုပြက္ခဒိန်လ (၁) ရက်အတွင်း ၀ န်ဆောင်ခအခကြေးငွေ (၁) ပတ်အတွက်အကြွေးစုစုပေါင်းထက် ကျော်လွန်၍ စုပြုံ။ မရပါ။ Zeevou သည်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားသည့်လအတွက်သာအကြုံးဝင်မည်။ Zeevou ၏မူဝါဒများနှင့်အညီဒေတာဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်အခြားဝန်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ဤသဘောတူညီချက်အရလုံလောက်သော ၀ န်ဆောင်မှုအဆင့်များပေးရန် Zeevou ၏ပျက်ကွက်မှုဟုမယူဆရပါ။
10 ။ Third Party Application များနှင့်စက်ပစ္စည်းများ
၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်အားရရှိနိုင်စေရန်အတွက်တတိယပါတီ application များ၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ (“ တတိယပါတီအပလီကေးရှင်းများ”) နှင့်တတိယပါတီကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားနိုင်သည် ဤတတိယပါတီအပလီကေးရှင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိနိုင်ပြီးသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများရှိသည်။ ဤတတိယပါတီအပလီကေးရှင်းများနှင့်ကိရိယာများကိုသင်အသုံးပြုခြင်းသည်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများကိုလိုက်နာရမည်။ Zeevou သည်မည်သည့် Third Party Application သို့မဟုတ် Device များ၏အပြုအမူ၊ အင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီအပလီကေးရှင်းများနှင့်စက်ပစ္စည်းများပံ့ပိုးသူနှင့်သင်ပြုနိုင်သည့်ငွေပေးငွေယူမှုများအတွက်တာ ၀ န်ယူပိုင်ခွင့်မရှိ၊ Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်တတိယပါတီအပလီကေးရှင်းများနှင့်ကိရိယာများ၏လိုက်ဖက်ညီမှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုအာမခံချက်မရှိပါ။
11 ။ ယေဘုယျ
ဤသတ်မှတ်ချက်များသည် Zeevou သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီနှင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရသင့်အားပေးသောအခြားသတိပေးချက်များသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အတူ၊ ကြိုတင်သဘောတူညီချက်များ၊ ကိုယ်စားပြုချက်များ (နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေ) နှင့်နားလည်မှုများကိုဖျက်သိမ်းပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်း သင်နှင့် Zeevou သည် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များတွင်ကိုင်တွယ်သောအခြားကိစ္စရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အကယ်၍ ပါတီတစ်ခုသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များအားဖောက်ဖျက်ခြင်းအားငြင်းဆန်ပါက၎င်းသည်အခြားချိုးဖောက်မှုများကိုစွန့်လွှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စာဖြင့်ရေးသားခြင်းမရှိပါကမည်သည့်စွန့်လွှတ်မှုမှမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
3. နှောင့်နှေးမှုများ -
အကယ်၍ နှောင့်နှေးခြင်း (သို့) ပျက်ကွက်ခြင်းသည်၎င်း၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောထိန်းချုပ်မှုအပြင်ဘက်တွင်ရှိသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့်မည်သည့်ပါတီသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များအရ၎င်း၏တာ ၀ န်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအားနှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ဤအပိုဒ်သည်ငွေပေးချေရန်မည်သည့်တာဝန်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
4. တာ ၀ န်မရှိပါ
သင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ သင်ရယူနေသည့်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အချက်အလက်ဖြစ်ပါကဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သင်လက်ခံသောအချိန်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအခွန်ထမ်းတစ် ဦး ၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သာဖြစ်လျှင် စည်းကမ်းချက်များထို့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဥပဒေများသည်ဤသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ကိုင်ပြီး Zeevou နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမေရိကန်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဤသဘောတူညီချက်မှပေါ်ပေါက်လာသောသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအငြင်းပွားမှုများအားလုံးအတွက်သက်ဆိုင်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ အမေရိကန်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အနုညာတစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုကိုအငြင်းပွားမှုများအားဖြေရှင်းရန်အခြေခံအားဖြင့်အသုံးပြုမှုလိုအပ်သည်နှင့်အမျှအငြင်းပွားမှုများအားဖြေရှင်းရန်၊ ဂျူရီရုံးတင်စစ်ဆေးမှုများနှင့်အတတ်ပညာဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုအကန့်အသတ်ရှိနိုင်သည့်အပြင်၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြု၍ သင် ၀ င်ရောက်နေသောသတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်သင်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံသည့်အချိန်၌နယူးဇီလန်၌အခွန်ထမ်းသူတစ် ဦး တည်း၏အချက်အလက်သာဖြစ်လျှင်နယူးဇီလန်ဥပဒေသည်ဤသဘောတူညီချက်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးသီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့တင်ပြသည်။ ဒီသဘောတူညီချက်မှထွက်သို့မဟုတ်ပေါ်ပေါက်လာအားလုံးအငြင်းပွားမှုများအတွက်နယူးဇီလန်၏တရားရုံးများ၏။ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြု၍ သင်ရယူနေသည့်သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ဤစည်းကမ်းချက်များကိုသင်လက်ခံသည့်အချိန်တွင်သြစတြေးလျား၌အခွန်ထမ်းသူတစ် ဦး တည်းအတွက်သာဖြစ်လျှင်သြစတြေးလျဥပဒေသည်ဤသဘောတူညီချက်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးသင်ကသီးခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့တင်ပြရမည်။ ဤသဘောတူညီချက်မှထွက်ပေါ်လာသောအငြင်းပွားမှုများအားလုံးအတွက်သြစတြေးလျတရားရုံးများ။ အခြားအခြေအနေများအားလုံး၌ဤသဘောတူညီချက်သည်ဂျာစီဥပဒေများဖြင့်အုပ်ချုပ်ပြီးသင်ဤသဘောတူညီချက်နှင့် ဆက်စပ်၍ ပေါ်ပေါက်လာသောအငြင်းပွားမှုများအတွက်ဂျာစီတရားရုံးများ၏သီးသန့်စီရင်ပိုင်ခွင့်သို့တင်ပြသည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ပြprovision္ဌာန်းချက်သည်မမှန်ကန်တဲ့၊ အတည်မပြုနိုင်သောသို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်နေလျှင်ထိုအပိုင်းသို့မဟုတ်ပြprovision္ဌာန်းချက်ကိုတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာ၏အစိတ်အပိုင်းသို့မဟုတ်ပြishes္ဌာန်းချက်၏မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုပြီးမြောက်စေသည့်ပြဌာန်းချက်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးသည်။ ကျန်ရှိသောဤသဘောတူစာချုပ်သည်ပါတီများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များအရအခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှပေးသောအသိပေးချက်သည်အီးမေးလ်ဖြင့်ရေးသား။ ထုတ်လွှင့်မှုတွင်ပေးသည်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။ Zeevou သို့အကြောင်းကြားစာများပေးပို့ရမည် အောင်မြင်ခြင်း@ zeevou.com သို့မဟုတ် Zeevou မှသင့်အားအီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားထားသောအခြားအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုကိုလည်းဆိုလိုသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်၏ ၀ င်ရောက်မှုကိုပြင်ဆင်ချိန်တွင်သင်ပေးသောအီးမေးလ်သို့သင်အကြောင်းကြားစာများပေးပို့လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ် အကယ်၍ သင်ဤနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုမွမ်းမံလျှင်၊ သင့်အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအဓိကအီးမေးလိပ်စာသည်အကြောင်းကြားစာထုတ်ပေးသည့်အချိန်တွင်ရောက်လိမ့်မည်။
8. အာမခံချက်ရှင်းလင်းချက် -
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်မည်သည့်ပုံစံမျိုးမှမဆိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသော်လည်းကောင်း၊ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောသော်လည်းကောင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို“ ဖြစ်သကဲ့သို့” နှင့်“ ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်း” ပေးသည်ကိုသဘောတူပြီးသဘောတူသည်။ ZEEVOU နှင့်ပါ ၀ င်သူများအားလုံးသည်မည်သည့်အာမခံချက်၊ မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်မည်သည့်မည်သည့်အာမခံချက်၊ ZEEVOU ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အရာမှပါ ၀ င်သည် ၀ န်ဆောင်မှုသည် MALWARE သို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းများမှအခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုအာမခံသည်။ ထို့အပြင်၊ ZEEVOU မှမည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုကိုမှပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အာမခံချက်၊ မည်သည့်အာမခံချက်၊ အာမခံချက်သို့မဟုတ်တတိယအပိုင်းလျှောက်ထားမှုများ (သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများ) အတွက်အသုံးပြုသူတာ ၀ န်ယူမှု၊ ပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်အခြားကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်ဟိုက်ပါလင့်ခ်ဆိုဒ်ကိုမဆိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမဆိုကြော်ငြာခြင်းသို့မဟုတ်အခြားကြော်ငြာများနှင့် ZEEVOU တို့သည်သင်နှင့်အနာဂတ်နှင့် ကြိုတင်၍ ပေးသူများ၏ကြားဝင်ညှိနှိုင်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်သို့မဟုတ်တာ ၀ န်မရှိပါ။
ZEEVOU မှရရှိသောနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေမည်သည့်အကြံဥာဏ်မျှသို့မဟုတ်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မျှ ZEEVOU ၏မည်သည့်အာမခံချက်ကိုမဆိုတီထွင်ရမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း၊ သင့်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုစီစစ်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာရှိသည်။ သို့သော်ဤအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အချို့သောရှင်းလင်းပြတ်သားသော ၀ န်ဆောင်မှုခံနေရဆဲဖြစ်သဖြင့်ဤထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုအသုံးမပြုပါက ၀ န်ဆောင်မှုခံနေရသည်။
ကြိုတင်၍ အကန့်အသတ်မရှိဘဲဤအပိုင်း၌မည်သည့်အရာမျှ ZEEVOU ၏တာဝန်ဝတ္တရားကိုကန့်သတ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်သို့မဟုတ်စုစုပေါင်းသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်သောစွမ်းဆောင်ရည် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုဌာန၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အရေးပါသောတာဝန်များ။ ဤအပိုင်းသည်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေအရခွင့်ပြုချက်အပြည့်အ ၀ ရရှိသည့်အတိုင်းအတာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ဤအပိုင်းသည်သင်၏သတ်မှတ်ထားသည့်အခွင့်အရေးများကိုစားသုံးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
Zeevou သည်ဤသဘောတူညီချက်အရ၎င်း၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုခွင့်ပြုချက်မပါဘဲလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်သည်ပါတီများ၏အပြန်အလှန်နားလည်မှုအပြည့်အ ၀ နှင့်သီးသန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပြီးဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ဤသဘောတူညီချက်၏အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားနားလည်မှုများ၊ ဆက်သွယ်မှုများနှင့်အခြားနားလည်မှုများကိုဖျက်သိမ်းခြင်း၊ မဟုတ်ရင်ဤနေရာတွင်ထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်မှလွဲ။ နှစ် ဦး စလုံးပါတီများကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်၏ရလဒ်အနေဖြင့်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ မိတ်ဖက်၊ ဖက်စပ်သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်ကိုမျှဖန်တီးထားခြင်းမရှိပါ။ မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုဖောက်သည်သည်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုကုမ္ပဏီအားချည်နှောင်ရန်အခွင့်အာဏာမရှိပါ။
10 ။ တတိယပါတီအခွင့်အရေးများ
ဤသတ်မှတ်ချက်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိသောလူတစ် ဦး သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များအားအကျိုးခံစားခွင့် (သို့) ပြenfor္ဌာန်းရန်လိုက်နာရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။
11 ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အပိုဆောင်းအသုံးအနှုန်းများ
သင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ သင်ရယူနေသည့်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အချက်အလက်ဖြစ်ပါကဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအခွန်ထမ်းတစ် ဦး ၏ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်လျှင်အောက်ပါအပိုဆောင်းအသုံးအနှုန်းများကိုကျင့်သုံးမည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ဤအချက်ကိုသေချာဖတ်ပါ - သင်၏အခွင့်အရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
အောက်ပါအမေရိကန်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအခွန်ထမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည် (သို့) သင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို သုံး၍ သင်ရယူနေသည့်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအခွန်ထမ်းတစ် ဦး ၏အချက်အလက်ဖြစ်လျှင် သင်သည်ဤစည်းကမ်းချက်များကိုလက်ခံသောအချိန်သို့မဟုတ်အမေရိကန်တွင်အငြင်းပွားမှုအားဖြေရှင်းရန်သင်အခြားနည်းဖြင့်ရှာရန်ကြိုးစားပါကသင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအခွန်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်သင် ၀ န်ဆောင်မှုများ သုံး၍ သင်အသုံးပြုနေသောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်လျှင်လူတစ် ဦး ၏အချက်အလက်ဖြစ်သည်။ သင်သည်ဤဝေါဟာရများကိုသင်လက်ခံသည့်အချိန်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအခွန်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ Zeevou ကိုအောက်ပါအတိုင်းသဘောတူသည် -
က။ အကျဉ်းချုပ် -
ဖောက်သည်များ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုအများစုကိုအလျင်အမြန်ဖြေရှင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံအဖွဲ့သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်ဖောက်သည်၏ကျေနပ်မှုကိုရရှိနိုင်သည် အောင်မြင်ခြင်း@ zeevou.com။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာအဖွဲ့သည်မကျေနပ်သောအဖြစ်အပျက်တွင်သင်၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မအောင်မြင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အငြင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ) ထိုအငြင်းပွားမှုများသည်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အထွေထွေတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တရားရုံးတွင်အစားထိုးတရားစွဲဆိုမှုအငယ်တန်းများမှတဆင့်။ အနုညာတစီရင်တရားရုံးအတွက်တရားစွဲဆိုမှုထက်ပိုမိုအလွတ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်တရားသူကြီး (သို့) ဂျူရီအစားကြားနေခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်သည်ကိုအသုံးပြုသည်။ ခုံသမာဓိလူကြီးများသည်တရားရုံးမှပေးသည့်အလားတူပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုသက်သာစေသည်။ ဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာခုံသမာဓိမည်သည့်ကိုယ်ပိုင်အခြေခံပေါ်မှာနေရာယူလိမ့်မည်; CLASS အနုညာတစီရင်ခြင်းနှင့် CLASS လှုပ်ရှားမှုများအားခွင့်ပြုခြင်းမရှိသော ZEEVOU နှင့်သင်သဘောတူသည်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ထက်မပိုသောမခိုင်လုံသောပြောဆိုမှုများအတွက် Zeevou သည် AAA ပုံစံ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်စရိတ်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင်သင်သည် Zeevou မှရှေ့နေများ၏အခကြေးငွေကိုသင်တရားရုံးတွင်ရောက်ရှိနေသည့်အနည်းဆုံးအတိုင်းအတာအထိပြန်လည်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အခြားအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း (ODR-platform) အတွက်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတွင်လည်းသင်တိုင်ကြားနိုင်သည်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့်သင် ODR ပလက်ဖောင်းကိုရှာနိုင်သည် https: //ec.europa.eu/consumers/odr ။
၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်နည်းလမ်းနှင့်မဆိုအငြင်းပွားမှုသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုသည်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ခြင်းအားဖြင့်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ သင့်တရားစွဲဆိုမှုများကအရည်အချင်းပြည့်မီပါက၊ ဖက်ဒရယ်အနုညာတစီရင်အက်ဥပဒေသည်ဤပြprovision္ဌာန်းချက်၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ပြenforcement္ဌာန်းမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ ခုံသမာဓိရုံးသည်အခြားကိစ္စရပ်များအားလုံးအတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားဥပဒေကိုအသုံးပြုရမည်။ ဆန့်ကျင်ဖက်ဘာမှမဆိုသော်လည်း, ခုံသမာဓိ၏မည်သည့်ပါတီမဆိုအချိန်မရွေးအရည်အချင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏မဆိုတရားရုံးကနေတရားရုံးမိန့်သို့မဟုတ်အခြားသာတူညီမျှကယ်ဆယ်ရေးပုံစံများကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ မည်သည့်အငြင်းပွားမှုကိုမဆိုပါ ၀ င်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွင်အငြင်းပွားမှုအားလုံးဖြစ်စေရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသဘောတူကြသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်မောင်းနှင်အားသို့မဟုတ်မည်သည့်မောင်းနှင်မှုတွင်မဆို၊ ဤသဘောတူညီချက်သို့ ၀ င်ခြင်းနှင့်အနုညာတစီရင်ခြင်းကိုသဘောတူခြင်းအားဖြင့်၊ သင်နှင့် Zeevou တို့သည်အခွင့်အရေးတရားဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုမှုအားတရား ၀ င်ခြင်းနှင့်ဂျူရီမှတရားခွင်သို့တက်ရောက်ရန်အခွင့်အရေး ZEEVOU နှင့်သင်သဘောတူသည်။ ထို့အပြင်၊ Zeevou နှင့်သင်သဘောတူလက်ခံသည် CLASS လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်သို့မဟုတ် CLASS-WASIS BASIS တွင်တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤအခွင့်အရေးများကိုသင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်ကို Zeevou နှင့်သင်သဘောတူသည်။
ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုစတင်ရန်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်သောတောင်းဆိုခြင်းနှင့်သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုဖော်ပြပါ Zeevou လီမိတက်၊ PO Box 437၊ Kensington ကုန်သည်များ၊ ၄၆/၅၀ Kensington Place, St Helier, Jersey, JE46 50ZE, Channel Islands။ ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုအမေရိကန်အနုညာတစီရင်ခြင်းအသင်း (AAA) မှ AAA ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင် AAA ခုံသမာဓိလူကြီးရှေ့မှောက်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းမှာ www.adr.org သို့မဟုတ် 1-800-778-7879 သို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ခုံသမာဓိလူကြီးတို့၏အခကြေးငွေများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးကို AAA ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရအုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် Zeevou သည်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိဟုဆုံးဖြတ်သည် မှလွဲ၍ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ထက်နည်းသောတောင်းဆိုမှုများအတွက်ထိုအဖိုးအခများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပြန်လည်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ Zeevou သည်ခုံသမာဓိမှစီရင်ဆုံးဖြတ်သူမှသင်၏တောင်းဆိုမှုများ (သို့) ကာကွယ်မှုများသည်အချည်းနှီးဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခြင်း မှလွဲ၍ ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက်ရှေ့နေများ၏အခကြေးငွေသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ပါ။ သင်သို့မဟုတ် Zeevou သည်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေတင်ပြချက်များအပေါ် မူတည်၍ Zeevou ကိုသင်သဘောတူသည်။ Zeevou ကိုသင်သဘောတူသည်မှာလူတ ဦး ချင်းစီသည်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုသင်နေထိုင်သောခရိုင်သို့မဟုတ်အခြားအပြန်အလှန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောနေရာတွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ Zeevou နှင့်သင်သဘောတူသည်ခုံသမာဓိ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးအယူခံ ၀ င်မည်မဟုတ်ဘဲခုံသမာဓိစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုသည်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောတရားရုံးတစ်ခုတွင် ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ Zeevou နှင့်သင်သဘောတူသည်မှာအမေရိကန်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဤသဘောတူညီချက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း၊
12 ။ ဆက်သွယ်ရန်
၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြောဆိုကဏ္ section ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် Zeevou ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Zeevou ကိုသင်ပျော်ရွှင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ကန်ထရိုက်တာအဖွဲ့အစည်း - Zeevou လီမိတက်
ပထမထပ် Kensington ကုန်သည်များ၊ ၄၆/၅၀ Kensington Pl, St Helier JE1 46ZE, ဂျာစီ၊ ချန်နယ်ကျွန်းများ
© Zeevou လီမိတက်
ဤ Controller-to-Controller Addendum (“ CCA”) သည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ, Zeevou လီမိတက် (“ Zeevou”) နှင့်သင် (“ ဝယ်သူ”) တို့အကြား (“ သဘောတူညီချက်”) ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသီးခြားလွတ်လပ်သောထိန်းချုပ်သူဖြစ်ကြောင်းပါတီများကအသိအမှတ်ပြုသည်။ အဆိုပါပါတီများပူးတွဲ Controller အဖြစ်ပါဝင်သောဒေတာကိုလုပ်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ပါတီတစ်ခုချင်းစီသည် GDPR အောက်ရှိ Controller အနေဖြင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလိုက်နာရမည်။ ပါတီတစ်ခုချင်းစီသည်၎င်း၏လိုက်နာမှုအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သီးခြားစီတာဝန်ယူရမည်။
၁။ EEA ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ
ဒီ CCA မှာ:
“ သဘောတူထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များ” ဆိုသည်မှာဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းဖောက်သည်မှအသုံးပြုသော Zeevou ၀ န်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုရန် (အောက်တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း) သုံးစွဲသူမှအသုံးပြုသော Zeevou ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆိုသည်။ အဆိုပါ Zeevou ဝန်ဆောင်မှု။
“ အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ” ဆိုသည်မှာအထွေထွေဒေတာကာကွယ်မှုစည်းမျဉ်း (“ GDPR”) နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်အလယ်အလတ်ဥပဒေများအပါအ ၀ င်သက်ဆိုင်သည့် privacy နှင့်အချက်အလက်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများအားလုံးကိုဆိုလိုသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေး၏ privacy ကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဥရောပသမဂ္ဂ၏အစိတ်အပိုင်း) ပြင်ဆင်မှု၊ အစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်နှင့်အမျှလုံခြုံမှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားချက် (၂၀၀၂ / ၅၈ / EC) အပါအ ၀ င်၊ လုံခြုံရေးနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေး (EC ညွှန်ကြားချက်) စည်းမျဉ်းများ ၂၀၀၃ (SI 2002/58) နှင့်အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ 2003 ။
“ အီးယူကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ” ဆိုသည်မှာ Zeevou မှ Zeevou ၀ န်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်ဖောက်သည်ကိုယ်စား Zeevou မှဆောင်ရွက်သည့်ဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာတွင် (ဤ CCA ၏နေ့စွဲတွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအပါအဝင်) တည်ရှိသည့်အချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆိုသည်။
"ခွင့်ပြုလက်ခံရရှိသူများ" ဆိုသည်မှာသဘောတူညီချက်ပါ ၀ င်သူများနှင့်အသုံးပြုသူများကိုဆိုသည်။
“ မျှဝေထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်” ဆိုသည်မှာ Zeevou မှ Zeevou ဝန်ဆောင်မှုတွင်ထည့်သွင်းပြီးသုံးစွဲသူများနှင့်မျှဝေထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆိုလိုသည်။ သံသယမဖြစ်စေရန်မျှဝေထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များတွင်အီးယူကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ အသုံးပြုသူဒေတာ၊ မှတ်စုများသို့မဟုတ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များမပါဝင်ပါ။
Zeevou ဝန်ဆောင်မှုဆိုသည်မှာဆိုလိုသည် ဖောက်သည်အား Zeevou မှရရှိနိုင်သော it ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲ။
"အသုံးပြုသူကို": ဆိုလိုသည်မှာဖောက်သည်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိပြီးသဘောတူညီချက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ Zeevou ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အခွင့်အာဏာရှိသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သို့မဟုတ် ၀ ယ်သူ၏အကြံပေးကိုဆိုသည်။
“ အသုံးပြုသူဒေတာ” ဆိုသည်မှာအီးယူအသုံးပြုသူများအသုံးပြုသည့်အချက်အလက်ကိုဆိုလိုသည်။
၁.၂ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမျှဝေခြင်း။ ဤအပိုင်း (၁) သည် Zeevou မှသုံးစွဲသူများအားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမျှဝေသူအားဝေမျှရန်မူဘောင်ကိုဖော်ပြထားသည်။ မျှဝေထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသဘောတူညီထားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာမျှဝေမည်ကိုပါတီတစ်ခုစီကအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤအပိုင်း ၁ အရ Zeevou တွင်ထားရှိသောတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်သဘောတူညီချက်များသည်သဘောတူထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သောဖောက်သည်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
၁.၃ ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်မလိုက်နာခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပါတီတစ်ခုချင်းစီသည်ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေအရထိန်းချုပ်သူတစ် ဦး အပေါ်ထားရှိသည့်တာဝန်ဝတ္တရားအားလုံးကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားတစ်ဖက်မှရေးသားထားသောအကြောင်းကြားစာကို ၁၅ ရက်အတွင်းပြန်လည်ကုစားမပေးနိုင်လျှင်ပါတီတစ်ခုမှဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအားပြbre္ဌာန်းထားသည့်အချက်များသည်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များပေးရမည်။ အခြားသက်ဆိုင်သူများကသဘောတူညီချက်ကိုချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်စေမည်။
၁.၄ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လွှဲပြောင်းခြင်း။ ဆုံးဖြတ်ချက် ၂၀၀၄ / ၉၁၅ / EC အရဥရောပကော်မရှင်မှအတည်ပြုသည့်အတိုင်းပြပွဲ A (the SCCs) အဖြစ်ပူးတွဲဖော်ပြထားပြီးချုပ်ကိုင်သူများအတွက်စံကန်ထရိုက်စာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များကိုဤအဖွဲ့များကဤဥပဒေတွင်ပါ ၀ င်သည်။
၁.၅ ဖောက်သည်၏တာဝန်ဝတ္တရားများ။ ဖောက်သည်သည် -
(၁) မျှဝေထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသဘောတူထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာဆောင်ရွက်ခြင်း (၂) ဒေတာများနှင့်အညီသဘောတူထားသောရည်ရွယ်ချက်များ မှလွဲ၍ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မျှဝေထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတရား ၀ င်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခွင့်ပြုရန်လိုအပ်သောအသိပေးချက်များနှင့်သဘောတူညီချက်များအားလုံးကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ရန်။ ကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေများအားလုံးနှင့်အတူလိုက်နာ;
ခွင့်ပြုထားသည့်လက်ခံသူများ မှလွဲ၍ မည်သူမဆိုမျှဝေသုံးစွဲထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခွင့်ကိုထုတ်ဖော်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်မပြုခြင်း၊
ခွင့်ပြုထားသည့်လက်ခံသူအားလုံးသည်ချမှတ်ထားသောစာချုပ်များနှင့်မသက်ဆိုင်သော (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများအပါအ ၀ င်) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများအပါအဝင်) နှင့်စပ်လျဉ်း။ စာဖြင့်ရေးသားထားသောစာချုပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများ (အသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင်၊ တစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောတာဝန်ဝတ္တရားများကိုချမှတ်နိုင်သည်အထိ) သေချာစေရမည်။ ဤအပိုင်း ၁;
Zeevou မှသင့်လျော်စွာတောင်းဆိုခဲ့လျှင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ (သို့) ဥပဒေနှင့်မညီသောလုပ်ဆောင်မှုများမှကာကွယ်ရန်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းတို့မှကာကွယ်ရန်သင့်တော်သောနည်းပညာနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအစီအမံများ၊
ဖောက်သည်မှ (၁) GDPR ၏အပိုဒ် ၄၅ အရလုံလောက်သောကာကွယ်မှုပေးသည့်ဥရောပကော်မရှင်ကအတည်ပြုထားသောနိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်းခြင်းကို EEA ပြင်ပရှိ Zeevou ထံမှရရှိသောမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို EEA ပြင်ပမှလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရ။ GDPR ၏အပိုဒ် ၄၆၊ (၃) GDPR ၏ပုဒ်မ ၄၉ ပါသတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေများအတွက် derogations တစ်ခုသည်လွှဲပြောင်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နှင့်
ဖျက်သိမ်းခြင်း (ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုစာဖြင့်အတည်ပြုအတည်ပြုခြင်း) သို့မဟုတ် Shared Personal Data နှင့်မိတ္တူများကို Zeevou ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအားဖောက်သည်အားပေးအပ်ပြီးရက်ပေါင်းခြောက်ဆယ် (၆၀) အတွင်း Zeevou သို့ပြန်လည်ပေးပို့ပါ။ နှင့် Zeevou ၏တောင်းဆိုချက်အရမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ဥပဒေနှင့်ဖောက်သည်များကမျှဝေထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမျှဝေထားသည့်မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှဝေထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်ရန်ညွှန်ကြားသည်။
မည်သည့်မျှဝေထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို Zeevou နှင့်အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲအချက်အလက်ဘာသာရပ်အသုံးပြုခွင့်တောင်းဆိုချက်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်မည်သည့်မျှဝေထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုရ။
GDPR (“ subject access request”) ၏အခန်း ၃ နှင့်အညီဒေတာဘာသာရပ်အသုံးပြုခွင့်တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်း Zeevou ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်ခြင်းကိုသတိပြုမိရန် Zeevou အားအလွန်အမင်းနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းကြားခြင်း၊ ထိုသို့သောအသိပေးချက်ကိုထိုကဲ့သို့သောချိုးဖောက်မှုသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမှားသို့မဟုတ်တာ ၀ န်ယူမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုရ နှင့်
ဤအပိုင်း ၁ နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းပြသရန်တိကျသောမှတ်တမ်းများနှင့်အချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။
၁.၆ အပြန်အလှန်ကူညီခြင်း။ ပါတီတစ်ခုချင်းစီသည်မျှဝေထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ၏သက်ဆိုင်သောလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုလိုက်နာရန်အခြားတစ်ယောက်အားကူညီရမည်။ အထူးသဖြင့်ပါတီတစ်ခုစီသည် -
စီးပွားဖြစ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအထောက်အပံ့များကိုအခြားပါတီ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ဒေတာဘာသာရပ်၏တောင်းဆိုချက်ကိုတုံ့ပြန်ရန်နှင့်လုံခြုံရေး၊ ဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေအောက်ရှိ၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလုံခြုံရေး၊ အသိပေးချက်များချိုးဖောက်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသို့မဟုတ်အားပြိုင်မှုများမှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်တောင်းဆိုမှုများ။
ဘာသာရပ်အသုံးပြုခွင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်မည်သည့်အကူအညီအတွက်မဆို Zeevou သည်သင့်အားအားသွင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
1.7 အကြောင်းအရာ Access ကိုတောင်းဆိုမှုများ။ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည် Zeevou ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ Zeevou ၀ န်ဆောင်မှုမှရယူထားသောသတင်းအချက်အလက်အတွက်အကြောင်းအရာရယူခွင့်တောင်းဆိုမှုကိုတင်ပြလျှင်၎င်းကိုတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း Zeevou မှသင့်တော်သောကုန်ကျငွေဖြင့်ပေးလိမ့်မည်။ Zeevou သည်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာရန်ဖောက်သည်အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Zeevou မှစုံစမ်းမေးမြန်းသည့်အချိန်တွင်ဖောက်သည်အားပြသလိမ့်မည်။
၁.၈ Zeevou ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဝယ်သူမှဒေတာကိုမျှဝေသည်။ ဖောက်သည်မှ Zeevou ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူမျှဝေထားသောမည်သည့်အချက်အလက်မဆို၊ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသောလိမ်လည်မှုကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကို Zeevou မှ အသုံးပြု၍ Zeevou ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအခြားအိမ်ရှင်များသို့ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
၂ ။ တရား ၀ င် ၀ န်ထမ်းများနှင့်အေးဂျင့်များအနေဖြင့်မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများ၊ လုပ်ရပ်များ၊ တရားစွဲဆိုမှုများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုမဆိုအစိုးရ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၊ ဖောက်သည်သည်ဤ CCA ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခကြေးငွေများ။ ဤသဘောတူစာချုပ်ပါဆန့်ကျင်သောအရာတစ်ခုခုရှိနေသော်လည်းဤပုဒ်မ ၂ အရဖောက်သည်၏လျော်ကြေးပေးခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများသည်သဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသောတာဝန်ယူမှုကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကင်းလွတ်ရမည်။
၃ ။ ဒီ CCA သဘောတူညီချက်တစ်ခုပြင်ဆင်ချက်ပါဝငျသညျ။ SCCs အပါအ ၀ င်ဤ CCA နှင့်၎င်းသဘောတူညီချက်သည်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများ၏သဘောတူညီချက်နှင့်နားလည်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ CCA တွင်ပါရှိသော Zeevou ၏တာဝန်ဝတ္တရားများသည်သဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသောတာဝန်ယူမှုအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဒီ CCA တွင်ပါရှိသောတာဝန်ဝတ္တရားသဘောတူညီချက်တွင်ပါရှိသောအခြားတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင်ဖြစ်ကြသည်။ ဤ CCA နှင့်သဘောတူစာချုပ်ပါအခြားစည်းမျဉ်းများအကြားပaိပက္ခဖြစ်ပွားပါက၊ ဤ CCA ၏စည်းကမ်းချက်များသည်အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ သံသယကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်၊ သဘောတူညီချက်တွင်အချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများမှမည်သည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားကိုမဆိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိထိုဖယ်ထုတ်မှုများသည်အီးယူကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
၄။ ဆောက်လုပ်ရေး။ ဤ CCA တွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဆန့်ကျင်သောရည်ရွယ်ချက်မပေါ်ပေါက်ပါက - (က) အခြေအနေနှင့်မကိုက်ညီပါက၊ လက်ရှိတင်းမာနေတွင်အသုံးပြုသောစကားလုံးများသည်အနာဂတ်ကာလနှင့်အပြန်အလှန်ပါ ၀ င်သည်။ (ခ) မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမဆိုရည်ညွှန်းသည်၎င်းပုဂ္ဂိုလ်၏ဆက်ခံသူများနှင့်တာ ၀ န်များပါ ၀ င်သော်လည်း၊ အကယ်၍ သက်ဆိုင်လျှင်၊ ဤဆက်ခံသူနှင့်တာ ၀ န်ပေးမှုကိုဤ CCA မှတားမြစ်ခြင်းမရှိပါက၊ (ဂ) မည်သည့်ကျားမမဆိုရည်ညွှန်းသည်ကျားမမပါဝင်သည်။ ()) မည်သည့်သဘောတူညီချက်၊ စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်တူရိယာကိုမဆိုရည်ညွှန်းသည်ဤသဘောတူညီချက်၊ စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်ကိရိယာကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အခိုင်အမာပါ ၀ င်သည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီသက်ရောက်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ (င) ဤ CCA တွင်အသုံးပြုသောခေါင်းစဉ်များနှင့်စာတန်းထိုးများကိုအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အတွက်သာအသုံးပြုသည်။ ဤ CCA ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုရ။ (စ)“ ဤဥပဒေ၊ ”“ ဤဥပဒေ၊ ”“ ဤဥပဒေ” နှင့်အလားတူတင်သွင်းမှု၏စကားများသည်ဤ CCA ၏သီးခြားပုဒ်မသို့မဟုတ်ပုဒ်မခွဲနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ (ဆ)“ အပါအ ၀ င်” (နှင့်ဆက်စပ်သောအဓိပ္ပာယ်ရှိသော“ ပါဝင်သည်”) သည်ဤဝေါဟာရမတိုင်မီဖော်ပြချက်၏ယေဘုယျအားဖြင့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပဲပါဝင်သည်။
နောက်ဆုံးမေလ 31 ရက်, 2019 ရက်တွင် updated ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Community မှတတိယနိုင်ငံများသို့လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက်ပုံမှန်သဘောတူစာချုပ်ဝါကျများ (Controller မှ Controller Controller)
Zeevou, Inc (ယခု မှစ၍ ဒေတာတင်ပို့သူ)
တစ်ခုချင်းစီကို "ပါတီ"; အတူတူ "ဟုအဆိုပါပါတီများ" ။
“ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ”၊ “ အထူးအချက်အလက်အမျိုးအစားများ / အထိခိုက်မခံသောအချက်အလက်များ”၊ “ လုပ်ငန်းစဉ် / ပြုပြင်ခြင်း”၊ “ ထိန်းချုပ်သူ”၊ “ ပရိုဆက်ဆာ”၊ “ ဒေတာဘာသာရပ်” နှင့်“ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် / အခွင့်အာဏာ” တို့သည်ညွှန်ကြားချက် ၉၅ / 95 / EC ၁၉၉၅ အောက်တိုဘာ ၂၄ (“ အခွင့်အာဏာ” ဆိုသည်မှာဒေတာတင်ပို့သူထူထောင်သည့်နယ်မြေရှိအရည်အချင်းရှိသောအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအာဏာကိုဆိုလိုသည်)
“ ဒေတာတင်ပို့သူ” ဆိုသည်မှာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလွှဲပြောင်းပေးသော Controller ကိုဆိုသည်။
လွှဲပြောင်းခြင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ (ပါ ၀ င်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်) သည်ဝါကျများ၏အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောနောက်ဆက်တွဲခတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အချက်အလက်တင်ပို့သူ၏တာ ၀ န်
၎င်းသည်အချက်အလက်တင်သွင်းသူအားတောင်းဆိုမှုပြုပါကသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေမိတ္တူများသို့မဟုတ်အချက်အလက်တင်ပို့သူတည်ထောင်သည့်နိုင်ငံ၏ (ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်များမပါရှိပါက) ကိုကိုးကားချက်များနှင့်အတူပေးလိမ့်မည်။
အချက်အလက်တင်သွင်းသူများကအချက်အလက်တင်သွင်းသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အာဏာရှိသူများကအချက်အလက်တင်သွင်းသူမှတုန့်ပြန်မည်ဟုသဘောတူညီမှုမရှိပါကဒေတာတင်ပို့သူသည်သင့်လျော်စွာအတိုင်းအတာအထိဆက်လက်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ အချက်အလက်တင်သွင်းသူကမတုံ့ပြန်လိုလျှင်သို့မဟုတ်မဖြေနိုင်လျှင်သတင်းအချက်အလက်ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာရနိုင်သည်။ တုန့်ပြန်မှုများကိုသင့်လျော်သောအချိန်အတွင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။
အချက်အလက်များအရ၊ ပုဒ်မ ၃ အရတတိယပါတီအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများဖြစ်သည့်အချက်အလက်အကြောင်းအရာများအတွက်ဝါကျများကို၊ တောင်းဆိုမှုအရ၊ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များမပါရှိပါက၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားသည့်အခါဒေတာတင်ပို့သူသည်ဖယ်ရှားရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းကိုအာဏာပိုင်များ၏အာရုံသို့ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အကြောင်းအရင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုစာဖြင့်ရေးသားပေးပို့ရမည်။ သို့ရာတွင်ဒေတာတင်ပို့သူသည်အချက်အလက်အကြောင်းအရာများမှဖယ်ရှားထားသောလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလေးစားရန်သဘောတူထား သ၍ ဒေတာဘာသာရပ်များမှဝါကျများကိုအပြည့်အ ၀ ကြည့်ရှုရန်အာဏာပိုင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာရမည်။ ဒေတာတင်ပို့သူသည်ဝါကျများကိုလိုအပ်သည့်အာဏာပိုင်များထံလည်းပေးရမည်။
၂ ။ အချက်အလက်တင်သွင်းသူ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ
တရားမ ၀ င်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ်မတော်တဆဆုံးရှုံးမှုများ၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထုတ်ဖော်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ခြင်းတို့မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်သင့်တော်သောနည်းပညာနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအစီအမံများချမှတ်ထားပြီး၊ ကာကွယ်ခံရဖို့ဒေတာ။
ပရိုဆက်ဆာများအပါအ ၀ င်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူရန်ခွင့်ပြုထားသည့်မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်လုံခြုံမှုကိုလေးစားပြီးထိန်းသိမ်းနိုင်လိမ့်မည်။ ဒေတာတင်ပို့သူအပါအ ၀ င်အချက်အလက်တင်သွင်းသူ၏အခွင့်အာဏာအောက်တွင်ဆောင်ရွက်သူသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချက်အလက်တင်သွင်းသူ၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သာဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဤပြprovision္ဌာန်းချက်သည်ဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသူသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။
၎င်းဝါကျများကို ၀ င်သည့်အချိန်၌ဤဝါကျများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအာမခံချက်များအပေါ်သိသိသာသာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိစေမည့်မည်သည့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများရှိကြောင်းကို၎င်းတွင်ယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပေ။ ထိုကဲ့သို့သောဥပဒေများသတိထားဖြစ်လာလျှင်) လိုအပ်သောအခွင့်အာဏာမှထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းကြားစာ။
၎င်းသည်အချက်အလက်တင်ပို့သူအားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိအဆက်အသွယ်နေရာတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ အချက်အလက်တင်ပို့သူ၊ ဒေတာဘာသာရပ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအားလုံးကိုသက်ဆိုင်သောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခွင့်အာဏာရှိသူများနှင့်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည် ။ အချက်အလက်တင်ပို့သူအားတရား ၀ င်ဖျက်သိမ်းလျှင်သို့မဟုတ်ပါတီများကသဘောတူထားလျှင်အချက်အလက်တင်သွင်းသူသည်အပိုဒ် ၁ (င) ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များကိုလိုက်နာရန်တာ ၀ န်ယူမည်။
အချက်အလက်တင်ပို့သူများ၏တောင်းဆိုမှုအရ၊ သူသည်ဒေတာတင်ပို့သူအားအပို (၃) (အာမခံကြေးပါ ၀ င်နိုင်သည့်) အရ၎င်း၏တာ ၀ န်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်သောဘဏ္resourcesာရေးအရင်းအမြစ်အထောက်အထားများကိုပေးလိမ့်မည်
အချက်အလက်တင်ပို့သူများ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတောင်းဆိုမှုအရ၎င်းသည်အချက်အလက်တင်ပို့သူများ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ စာရင်းစစ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းများ (သို့မဟုတ်အချက်အလက်များမှရွေးချယ်ထားသောလွတ်လပ်သောသို့မဟုတ်ဘက်မလိုက်သောစစ်ဆေးရေးကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်စာရင်းစစ်များ) အတွက်အချက်အလက်များစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာစက်ရုံများ၊ တင်သွင်းသူနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အကြောင်းကြားစာနှင့်ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီအတွင်းသည်ဤဝါကျအတွက်အာမခံချက်များနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်လိုက်နာမှုကိုသေချာစေရန်, ဒေတာတင်သွင်းသူကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကန့်ကွက်မဟုတ်) ။ အချက်အလက်တင်သွင်းသူ၏နိုင်ငံအတွင်းရှိစည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်ထံမှလိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံခြင်းသည်အချက်အလက်တင်သွင်းသူကိုအချိန်မီရယူရန်ကြိုးစားမည်ဖြစ်သောခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆက်တွဲ (အေ) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အချက်အလက်များအားအပြောင်းအလဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာ (EEA) ပြင်ပတွင်ရှိသည့်တတိယပါတီအချက်အလက်ထိန်းချုပ်သူထံလွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်တင်ပို့သူအားအကြောင်းကြားခြင်းမရှိပါက
၃ ။ တာဝန်နှင့်တတိယပါတီအခွင့်အရေးများ
ပါတီတစ်ခုချင်းစီသည်ဤဝါကျများကိုချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အခြားပါတီများအားတာဝန်ခံရမည်။ ပါတီများအကြားတာ ၀ န်ခံမှုသည်အမှန်တကယ်ခံစားခဲ့ရသည့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ အပြစ်ပေးအရေးယူမှုများ (အထူးသဖြင့်ပါတီတစ်ခုအား၎င်း၏ရက်စက်သောအပြုအမူအတွက်အပြစ်ပေးရန်ရည်ရွယ်သည့်ပျက်စီးမှုများ) ကိုအထူးဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ပါတီတစ်ခုချင်းစီသည်ဤဝါကျများအရတတိယပါတီအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အချက်အလက်ဘာသာရပ်များအပေါ်တာဝန်ခံရမည်။ ၎င်းသည်အချက်အလက်တင်ပို့သူများ၏ဒေတာကာကွယ်မှုဥပဒေအရတာဝန်ယူမှုကိုမထိခိုက်ပါ။
ဒေတာဘာသာရပ်သည်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးခံစားခွင့်အနေဖြင့်ဤအပိုဒ်နှင့်ပုဒ်မ ၁ (ခ)၊ ၁ ())၊ ၁ (င)၊ ၂ (က)၊ ၂ (ဂ)၊ ဒေတာတင်သွင်းသူသို့မဟုတ်ဒေတာတင်ပို့သူများအားအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စာချုပ်ပါ ၀ င်သည့်ချိုးဖောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ )၊ II (င)၊ ၂ (ဇ)၊ ၂ (၁)၊ ၃ (က)၊ မိမိ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသို့လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အချက်အလက်တင်ပို့သူ၏နိုင်ငံတည်ထောင်သည့်နိုင်ငံတွင်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုလက်ခံပါ။ ဒေတာတင်သွင်းသူမှချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲချက်များပါ ၀ င်သည့်အနေဖြင့်ဒေတာတင်သွင်းသူနှင့်ဒေတာတင်သွင်းသူအပေါ်သူ၏အခွင့်အရေးကိုပြto္ဌာန်းရန်သင့်လျော်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ရန်အချက်အလက်တင်ပို့သူသည်ဒေတာတင်ပို့သူအား ဦး စွာတောင်းဆိုရမည်။ အချက်အလက်တင်ပို့သူသည် (ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်တစ်လဖြစ်လိမ့်မည်) ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအချိန်ကာလအတွင်းထိုသို့အရေးယူခြင်းမရှိပါကဒေတာဘာသာရပ်သည်ဒေတာတင်သွင်းသူအားသူ၏အခွင့်အရေးကိုပြဌာန်းလိမ့်မည်။ အချက်အလက်တင်သွင်းသူသည်ဒေတာတင်သွင်းသူအားဤအပိုဒ်များအရတရား ၀ င်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုကျေပွန်နိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုးပမ်းမှုများကိုအသုံးမပြုခဲ့သောဒေတာတင်ပို့သူနှင့်တိုက်ရိုက်တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ) ။
IV ။ စွဲချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေ
ဤဝါကျများသည်အပိုဆောင်း II (ဇ) အရဒေတာတင်သွင်းသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများမှအပအချက်အလက်များကိုတင်ပို့သူတည်ထောင်သည့်နိုင်ငံ၏ဥပဒေအရအုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အပိုဒ်အောက်မှာဒေတာတင်သွင်းနေဖြင့်ရွေးချယ်ထားကြသည်။
နှစ် ဦး စလုံးအားနှစ်ဖက်စလုံးမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်အာဏာပိုင်များကယူဆောင်လာသည့်အငြင်းပွားမှုသို့မဟုတ်ပြောဆိုမှုများရှိပါကပါတီများအနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအငြင်းပွားမှုများသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အသိပေးမည်ဖြစ်ပြီးအမြင်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည် သူတို့ကိုအချိန်မီပုံစံဖြင့်အဆင်ပြေစွာဖြေရှင်းရန်။
အချက်အလက်ပါ ၀ င်သူသို့မဟုတ်အာဏာပိုင်မှစတင်သောယေဘုယျအားဖြင့်မရရှိနိုင်သည့်ဖြန့်ကျက်ခြင်းမရှိသောဖျန်ဖြေခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပါတီများကသဘောတူကြသည်။ အကယ်၍ သူတို့သည်တရားစွဲဆိုမှုတွင်ပါ ၀ င်ပါကပါတီများအနေဖြင့်ယင်းကိုအဝေးမှ (ဥပမာတယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်အခြားအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်) ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအငြင်းပွားမှုများအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သောအခြားခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
၆ ။ ရပ်စဲ
ဒေတာတင်သွင်းသူသည်ဤဝါကျများအရ ၄ င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုချိုးဖောက်ပါကဒေတာတင်ပို့သူသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချက်အလက်တင်သွင်းသူအားဖောက်ဖျက်မှုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းများကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
အချက်အလက်တင်သွင်းသူအားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလွှဲပြောင်းခြင်းကိုအပိုဒ် (က) အရဒေတာတင်ပို့သူမှယာယီဆိုင်းငံ့ထားသည်။
အချက်အလက်တင်သွင်းသူများ၏ဤဝါကျများကိုလိုက်နာခြင်းကတင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏တရား ၀ င်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေတာတင်ပို့သူနိုင်ငံတည်ထောင်သည့်နိုင်ငံ၏တရား ၀ င်တရားရုံး (သို့) အချက်အလက်တင်သွင်းသူ (သို့) ဒေတာတင်ပို့သူများကဝါကျများကိုဖောက်ဖျက်ကြောင်းအာဏာပိုင်များကအယူခံ ၀ င်ခြင်းမပြုနိုင်သည့်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဒါမှမဟုတ်
အချက်အလက်တင်သွင်းသူအား၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသူများအားစီမံခန့်ခွဲရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ရန်အတွက်အသနားခံလွှာကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရပယ်ဖျက်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်သောကာလအတွင်းပယ်ချခြင်းမပြုဘဲ၊ တစ် ဦး အကွေ့အကောက်များသောတက်အမိန့်ကိုဖန်ဆင်းသည်, တစ် ဦး လက်ခံ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆိုကျော်ခန့်အပ်သည်, ဒေတာတင်သွင်းသူတစ် ဦး ချင်းဖြစ်လျှင်ဒေဝါလီခံခြင်းအတွက်ဂေါပကခန့်အပ်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကမိမိဆန္ဒအလျောက်စီစဉ်ခြင်းကို၎င်းမှစတင်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်မည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်မဆိုညီမျှအဖြစ်အပျက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်
ထို့နောက်ဒေတာတင်ပို့သူသည်အချက်အလက်တင်သွင်းသူနှင့်ဆန့်ကျင်။ ရသောအခြားမည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ၊ ဤဝါကျများကိုအဆုံးသတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အချက်အလက်တင်သွင်းသူအထက် (၁)၊ (၂)၊ (iv) တို့ပါ ၀ င်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင်ဤဝါကျများကိုလည်းဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
မည်သည့်ပါတီမဆိုဤဝါကျများကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ (၁) ညွှန်ကြားချက် ၉၅ / ၄၆ / EC အပိုဒ် ၂၅ (၆) အရကော်မရှင်၏အပြုသဘောလုံလောက်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတိုင်းပြည်နှင့် (သို့မဟုတ်ယင်း၏ကဏ္ sector) မှထုတ်ပေးလျှင် အချက်အလက်များကိုအချက်အလက်တင်သွင်းသူမှလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) (၂) ညွှန်ကြားချက် ၉၅ / ၄၆ / EC (သို့မဟုတ်အစားထိုးထားသောစာသားများ) သည်ဤနိုင်ငံတွင်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။
မည်သည့်အခြေအနေ၊ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မဆို (အပိုဒ် ၆ (ဂ) အရရပ်စဲခြင်းမှအပ) ဤဝါကျများအားမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၊ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်၎င်းတို့အားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီလိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှကင်းလွတ်ခွင့်မရှိကြောင်းပါတီများကသဘောတူသည် လွှဲပြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာ။
၇ ။ ဒီအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး
နောက်ဆက်တွဲ B တွင်ပါရှိသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမှမွမ်းမံခြင်းမှအပပါတီများသည်ဤဝါကျများကို ပြင်ဆင်၍ မရပါ။ ဤအချက်သည်ပါတီများအားလိုအပ်သည့်နေရာတွင်အပိုဆောင်းစီးပွားရေးဆိုင်ရာဝါကျများထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းကိုတားမြစ်ထားခြင်းမရှိပါ။
၈ ။ လွှဲပြောင်းမှုဖော်ပြချက်
လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အသေးစိတ်ကိုနောက်ဆက်တွဲခတွင်ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ဆက်တွဲခတွင်ဥပဒေအရလိုအပ်သောသို့မဟုတ်အရည်အချင်းရှိသောစည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်အစိုးရအားတုန့်ပြန်မှု မှလွဲ၍ နောက်ဆက်တွဲခတွင်လျှို့ဝှက်စီးပွားရေးအချက်အလက်များကိုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အေဂျင်စီသို့မဟုတ်အပိုဒ် I (င) အရလိုအပ်သည်။ ပါတီများအနေဖြင့်အပိုထပ်ဆောင်းလွှဲပြောင်းမှုများအတွက်ထပ်ဆောင်းနောက်ဆက်တွဲများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလိုအပ်ပါကအာဏာပိုင်များထံတင်ပြရမည်။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်နောက်ဆက်တွဲ (ခ) ကိုလွှဲပြောင်းမှုအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖုံးအုပ်ရန်ရေးဆွဲနိုင်သည်။
၁။ ရည်ရွယ်ချက်ကန့်သတ်ချက် - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုနောက်ဆက်တွဲခတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသို့မဟုတ်နောက်မှအချက်အလက်အကြောင်းအရာမှအခွင့်အာဏာပေးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာလျှင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်တွင်အသုံးပြုမည်သို့မဟုတ်ထပ်မံဆက်သွယ်နိုင်သည်။
၂။ ဒေတာအရည်အသွေးနှင့်အချိုးညီမှု - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်တိကျမှုရှိရမည်ဖြစ်ပြီးလိုအပ်ပါကခေတ်မီအောင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်၎င်းတို့လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ထပ်မံပြုပြင်ခြင်းအတွက်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်သော၊ သက်ဆိုင်မှုနှင့်အလွန်အကျွံမဖြစ်သင့်ပါ။
၃။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု - အချက်အလက်တင်ပို့သူမှသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါကအချက်အလက်အကြောင်းအရာများသည်မျှတသောအပြောင်းအလဲကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကို (လုပ်ငန်းစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကဲ့သို့) ပေးရမည်။
၄။ လုံခြုံရေးနှင့်လျှို့ဝှက်ချက် - နည်းပညာနှင့်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုဒေတာထိန်းချုပ်သူမှကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ မတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပရိုဆက်ဆာအပါအ ၀ င်ဒေတာထိန်းချုပ်သူ၏အခွင့်အာဏာအောက်တွင်ဆောင်ရွက်သူမည်သူမဆိုသည်ဒေတာထိန်းချုပ်သူထံမှညွှန်ကြားချက်များမှအပအချက်အလက်များကိုမပြုလုပ်ရ။
၅။ လက်လှမ်းမီမှု၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ကန့်ကွက်ခြင်းအခွင့်အရေးများလမ်းညွှန်ချက် ၉၅ / ၄၆ / EC အပိုဒ် ၁၂ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဒေတာဘာသာရပ်များသည်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်စေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရမည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိသောကြားကာလများသို့မဟုတ်၎င်းတို့နံပါတ်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်စနစ်ကျသောသဘောသဘာဝများအပေါ် အခြေခံ၍ သို့မဟုတ်အချက်အလက်တင်ပို့သူ၏နိုင်ငံ၏ဥပဒေအရလက်လှမ်းမီရန်မလိုအပ်သည့်အခြေခံအားဖြင့်အလွဲသုံးစားပြုသည့်တောင်းဆိုမှုများမှအပ။ အခွင့်အာဏာက၎င်း၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားလျှင်, အဲဒီလိုလုပ်နေတာမှာလည်းသတင်းအချက်အလက်တင်သွင်းသူသို့မဟုတ်ဒေတာတင်သွင်းသူနှင့်ဆက်ဆံသောအခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏အကျိုးစီးပွားကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်သည့်အခါဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒေတာဘာသာရပ်၏အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့် (သို့) တစ် ဦး ချင်း မှလွဲ၍ အခြားသူများ၏အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ရင်းမြစ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒေတာဘာသာရပ်များသည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမှန်ကန်တိကျမှုမရှိခြင်း (သို့) ဤအခြေခံမူများနှင့်မကိုက်ညီသောနေရာများတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ တောင်းဆိုချက်၏တရားဝင်မှုကိုသံသယဝင်ရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များရှိပါကအဖွဲ့အစည်းသည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုမီထပ်မံအကြောင်းပြချက်များလိုအပ်လိမ့်မည်။ အချိုးအစားမညီမျှမှုအားထုတ်မှုများပါဝင်ပါကအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသထားသည့်တတိယပါတီများအားပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းများအားအကြောင်းကြားရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒေတာဘာသာရပ်တစ်ခုသည်သူ၏အခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သောခိုင်လုံသောခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များရှိပါကသူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကိုကန့်ကွက်နိုင်ရမည်။ မည်သည့်ငြင်းဆိုမှုအတွက်သက်သေပြရမည့် ၀ န်ထုပ် ၀ န်သည်အချက်အလက်တင်သွင်းသူအပေါ်တွင်မူတည်ပြီးအချက်အလက်အကြောင်းအရာသည်အခွင့်အာဏာရှေ့မှောက်တွင်ငြင်းဆန်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်နိုင်သည်။
၆။ အထိခိုက်မခံသောဒေတာများ - အချက်အလက်တင်သွင်းသူသည်အပို (၂) အရ၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အညီထိုကဲ့သို့သောအထိခိုက်မခံသောအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ (ဥပမာလုံခြုံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည်) ကိုယူရမည်။
၇။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသောအချက်အလက်များ။ ။ တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါထိရောက်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသင့်ပြီး၊ အချက်အလက်များကို၎င်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်သူ၏အချက်အလက်များကိုအချိန်မရွေးဖယ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
၈။ အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - ဤအချက်၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်“ အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်” ဆိုသည်မှာအချက်အလက်တင်ပို့သူ (သို့) ဒေတာတင်သွင်းသူမှဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆိုလိုသည်။ သူနှင့်သက်ဆိုင်သောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်များဖြစ်သောဥပမာအားဖြင့်သူ၏အလုပ်ခွင်၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ အကြွေးယူနိုင်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အပြုအမူစသည်တို့ကိုအကဲဖြတ်ရန်။ အချက်အလက်တင်သွင်းသူသည်အချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရ။
(၂) (ဒေတာဘာသာရပ်အားသက်ဆိုင်သည့်အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်၏ရလဒ်များကိုပါတီများမှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သို့မဟုတ်အခြားပါတီများအားကိုယ်စားပြုရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။
ဒေတာတင်သွင်းသူမှဒေတာတင်ပို့သူမှ Zeevou ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသွင်းရန်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အိမ်လိပ်စာ၊ ကျား၊ မမွေးရက်၊ စသည်)
သင်၏နေရာထိုင်ခင်းလိုအပ်ချက်များ၊ ဘတ်ဂျက်၊ နေထိုင်မှုကြာချိန်နှင့်နေထိုင်ရန်အမျိုးအစားစသည့်သတင်းအချက်အလက်
Zeevou သို့သတင်းအချက်အလက်များကိုကြော်ငြာမိတ်ဖက်များ (သို့) ရည်ညွှန်းသည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှဖြတ်သန်းသည်
၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု၏မျက်နှာပြင်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာသရုပ်ခွဲအချက်အလက်
သဘောတူစာချုပ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ Zeevou သည်ဖောက်သည်မှ Zeevou ဝန်ဆောင်မှုသို့ပေးသောမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆိုမိတ္တူကူးယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှသဘောတူစာချုပ်အရ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများအားလုံးကိုလိုက်နာပြီးမှသာလျှင် Zeevou သည်သုံးစွဲသူ၏အချက်အလက်များကိုတင်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားပံ့ပိုးသူထံလွှဲပြောင်းပေးသည့်အတွက်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပံ့ပိုးပေးရာတွင်ပါဝင်သောအလုပ်ပမာဏပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ။ ဤအကူအညီကိုရပ်စဲသည့် နေ့မှစ၍ ရက် ၃၀ အထိရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။